Edsodosy - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
1 [Ny nitomboan’ny Zanak’Isiraely, sy ny fahoriana nanjo azy tany Egypta] Ary izao no anaran’ny zanak’Isiraely izay niaraka tamin’i Jakoba nankany Egypta; samy nandeha mbamin’ny ankohonany avy izy rehetra:
5 Ary ny isan’ny olona rehetra naterak’i Jakoba dia fito-polo; fa Josefa efa tany Egypta rahateo.
6 Ary maty Josefa sy ny rahalahiny rehetra mbamin’izany taranaka rehetra izany.
7 Ary ny Zanak’Isiraely niteraka ka nitombo betsaka sy nihamaro ary nihahery dia nihahery indrindra, ka dia henika azy ny tany.
8 Ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egypta, izay tsy nahalala an’i Josefa.
9 Ary izy niteny tamin’ny vahoakany hoe: Indro, ny firenen’ny Zanak’Isiraely efa maro sy mahery noho isika;
10 andeha hanaovantsika hevitra ireo, fandrao hihamaro izy, ka raha tahìny hisy ady, dia homba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika, ary dia hiakatra hiala amin’ny tany.
11 Koa dia nanendreny mpifehy izy, mba hampahory azy amin’ny fanompoany mafy. Ary nanao tanàna fitehirizana ho an’i Farao izy, dia Pitoma sy Ramesesa.
12 Nefa araka ny nampahoriany azy no vao mainka nihamaroany sy nitomboany kosa; ka dia natahotra ny Zanak’Isiraely indrindra ny Egyptiana.
13 Dia nampanompoin’ny Egyptiana fatratra ny Zanak’Isiraely,
14 ka nataony mangidy ny fiainany tamin’ny fanompoana mafy, dia tamin’ny feta sy ny biriky mbamin’ny fanompoana rehetra any an-tsaha, dia ny fanompoana rehetra izay nampanompoany azy fatratra.
15 Ary ny mpanjakan’i Egypta niteny tamin’ny mpampivelona Hebreo (Sifra no anaran’ny anankiray, ary Poa no anaran’ny anankiray)
16 ka nanao hoe: Raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo, ka hitanareo eo amin’ny fipetrahany fa zazalahy, dia vonoy, fa raha zazavavy kosa, dia velomy.
17 Nefa natahotra an’Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nolazain’ny mpanjakan’i Egypta taminy, fa novelominy ihany ny zazalahy.
18 Dia nampaka ny mpampivelona ny mpanjakan’i Egypta ka nanao taminy hoe: Nahoana no nanao izany zavatra izany ianareo, ka novelominareo ihany ny zazalahy?
19 Fa hoy ny mpampivelona tamin’i Farao: Tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptiana ny vehivavy Hebreo; fa matanjaka izy, ka raha tsy mbola tonga any aminy akory ny mpampivelona, dia velona izy.
20 Dia nasian’Andriamanitra soa ny mpampivelona; ary nihamaro sy nihahery indrindra ny olona.
21 Ary tamin’izany, satria natahotra an’Andriamanitra ny mpampivelona dia nomen’Andriamanitra zanaka izy.
22 Dia nandidy ny vahoakany rehetra Farao ka nanao hoe: Ny zazalahy rehetra izay teraka dia ario an’i Neily, fa ny zazavavy rehetra kosa no velomy.
1 [Ny namonjena an’i Mosesy, sy ny nandraisan’ny zanakavavin’i Farao azy ho zanany] Ary nisy lehilahy anankiray avy amin’ny mpianakavin’i Levy lasa naka vady tamin’ny zanakavavin’i Levy.
2 Dia nanan’anaka ravehivavy ka niteraka zazalahy; ary rehefa hitany fa zaza tsara izy, dia nafeniny telo volana.
3 Ary rehefa tsy azony nafenina intsony izy, dia nangalany fiara zozoro, ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara, dia napetrany tao ny zaza; ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron’i Neily ny fiara.
5 Ary nidina ny zanakavavin’i Farao mba handro tao Neily; ary ny ankizivaviny nitsangatsangana teny amoron’i Neily; ary raha nahita ny fiara teo anaty zozoro ny zanakavavin’i Farao, dia naniraka ny mpanompovaviny iray izy ka nampaka azy.
6 Ary nony nosokafany, dia hitany ny zazakely; ary indro fa zazalahy mitomany. Dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe: Isan’ny zanaky ny Hebreo ity.
7 Dia hoy kosa ny anabaviny tamin’ny zanakavavin’i Farao: Handeha haka mpitaiza amin’ny vehivavy Hebreo va aho hankatỳ aminao mba hitaiza ny zaza ho anao?
8 Ary hoy ny zanakavavin’i Farao taminy: Andeha ary. Dia lasa razazavavy ka naka ny renin’ny zaza.
9 Ary hoy ny zanakavavin’i Farao taminy: Ento ity zaza ity, ka tezao ho ahy, fa izaho handoa ny karamanao. Dia nentin-dravehivavy ny zaza ka notezainy.
10 Ary rehefa lehibe ny zaza, dia nentiny tao amin’ny zanakavavin’i Farao izy, ka dia tonga zanany. Ary ny anarany nataony hoe Mosesy; fa hoy izy: Satria tamin’ny rano no nangalako azy.
11 [Ny nataon’i Mosesy hamonjeny ny namany, sy ny nandosirany nankany Midiana] Ary tamin’izany andro izany, rehefa lehibe Mosesy, dia nivoaka nankany amin’ny rahalahiny izy ka nijery ny fanompoany mafy, ary nahita lehilahy Egyptiana nanavokavoka ny anankiray tamin’ny Hebreo rahalahiny.
12 Dia niherikerika izy, ka nony hitany fa tsy nisy olona, dia novonoiny ilay Egyptiana, ary nasitriny tao amin’ny fasika ny faty.
13 Ary nony ampitson’iny, dia nivoaka indray izy, ary, indreo, nisy Hebreo roa lahy niady; dia hoy izy tamin’ilay diso: Nahoana no mamono ny namanao ianao?
14 Fa hoy izy: Iza no nanendry an’ialahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Moa mikasa hamono ahy koa va ialahy, tahaka ny namonoan’ialahy ilay Egyptiana? Dia raiki-tahotra Mosesy ka nanao hoe: Hay! fantatr’olona izany!
15 Ary rehefa ren’i Farao izany zavatra izany, dia nitady hamono an’i Mosesy izy. Fa Mosesy nandositra ny tavan’i Farao ka nonina tany amin’ny tany Midiana; ny nipetraka teo anilan’ny lavaka fantsakana izy.
16 Ary ny mpisorona tao Midiana nanana zanaka fito mirahavavy; ary avy izy ireo, dia nanovo rano ka nameno ny tavin-drano hampisotroany ny ondry aman’osin-drainy.
17 Ary avy kosa ny lehilahy mpiandry ondry ka nandroaka azy; fa Mosesy nitsangana ka namonjy azy, dia nampisotro rano ny ondry aman’osiny.
19 Ary hoy izy ireo: Nisy lehilahy Egyptiana anankiray namonjy anay tamin’ny tanan’ny mpiandry ondry sady nanovo rano ho anay, dia nampisotro ny ondry aman’osy.
20 Ary hoy izy tamin’ny zananivavy: Ka aiza izy? Nahoana no nilaozanareo izany lehilahy izany? Alao izy mba hihinan-kanina.
21 Ary sitrak’i Mosesy ny hitoetra tao amin-dralehilahy. Ary Zipora zananivavy dia nomeny ho vadin’i Mosesy.
22 Dia niteraka zazalahy izy, ary ny anarany nataon-drainy hoe Gersoma; fa hoy izy: Efa vahiny atỳ amin’ny tanin’ny firenena hafa aho.
23 [Ny nisehoan’Andriamanitra tamin’i Mosesy, sy ny nanirahany azy hanafaka ny olony] Ary tao anatin’izany andro maro izany dia maty ny mpanjakan’i Egypta; ary ny Zanak’Isiraely nisento noho ny fanompoany ka nitaraina; ary niakatra tany amin’Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompoany.
24 Ary Andriamanitra nandre ny fitarainany, dia nahatsiaro ny fanekeny tamin’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba.
25 Ary Andriamanitra dia nijery ny Zanak’Isiraely ka nahafantatra azy.
1 Ary Mosesy niandry ny ondry aman’osin’i Jetro rafozany, mpisorona tao Midiana, dia nitondra ny ondry aman’osy tany ankoatry ny efitra ka nankany Horeba, tendrombohitr’Andriamanitra.
2 Ary Ilay Anjelin’i Jehovah niseho taminy teo anaty lelafo teo amin’ny roimemy anankiray; dia nijery izy, ka, indro, nirehitra afo ny roimemy, kanefa tsy nahalevonana.
3 Ary hoy Mosesy: Hivily kely aho ka hizaha io fahitana lehibe io, hahafantarako izay tsy ahalevonan’ny roimemy.
4 Ary rehefa hitan’i Jehovah fa nivily hizaha izy, dia niantso azy tao afovoan’ny roimemy Andriamanitra ka nanao hoe: Ry Mosesy, ry Mosesy! Dia hoy izy: Inty aho.
5 Ary hoy Izy: Aza manakaiky etỳ; esory ny kapanao amin’ny tongotrao, fa tany masina io ijanonanao io.
6 Dia hoy koa Izy: Izaho no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitr’i Abrahama sy Andriamanitr’Isaka ary Andriamanitr’i Jakoba. Dia nisaron-tava Mosesy, fa natahotra hijery an’Andriamanitra izy.
7 Ary hoy Jehovah: Efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon’ny mpampiasa azy; eny, fantatro ny alahelony;
8 dia efa nidina Aho izao hamonjy azy amin’ny tanan’ny Egyptiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin’izany tany izany ho any amin’izay tany soa sy malalaka, dia any amin’izay tany tondra-dronono sy tantely, any amin’ny tanin’ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita.
9 Ary ankehitriny, indro, ny fitarainan’ny Zanak’Isiraely dia efa mby atỳ amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian’ny Egyptiana azy.
10 Koa avia ankehitriny ianao hirahiko ho any amin’i Farao hitondra ny Zanak’Isiraely oloko hivoaka avy any Egypta.
11 Fa hoy Mosesy tamin’Andriamanitra: Iza moa aho no hankany amin’i Farao sy hitondra ny Zanak’Isiraely hivoaka avy any Egypta?
12 Ary hoy Izy: Homba anao tokoa Aho; ary izao no famantarana ho anao fa Izaho no efa naniraka anao; rehefa entinao mivoaka avy any Egypta ny olona, dia hanompo an’Andriamanitra eto amin’ity tendrombohitra ity ianareo.
13 Ary hoy Mosesy tamin’Andriamanitra: Indro, rehefa tonga any amin’ny Zanak’Isiraely aho ka manao aminy hoe: Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ahy ho atỳ aminareo, ary hanao amiko hoe kosa izy: Iza moa no anarany? dia ahoana no havaliko azy?
14 Ary hoy Andriamanitra tamin’i Mosesy: IZAHO, IZAY IZY HATRIZAY HATRIZAY KA HO MANDRAKIZAY. Ary hoy koa Izy: Izao no holazainao amin’ny Zanak’Isiraely: IZAHO IZAY Izy no efa naniraka ahy ho atỳ aminareo.
15 Ary hoy koa Andriamanitra tamin’i Mosesy: Izao no holazainao amin’ny Zanak’Isiraely: Jehovah, Andriamanitry ny razanareo, dia Andriamanitr’i Abrahama sy Andriamanitr’i Isaka ary Andriamanitr’i Jakoba, no efa naniraka ahy ho atỳ aminareo; izany no anarako mandrakizay, ary izany no hahatsiarovana Ahy hatramin’ny taranaka fara mandimby.
16 Mandehana, dia angòny ny loholon’ny Isiraely, ka lazao aminy hoe: Efa niseho tamiko Jehovah, Andriamanitry ny razanareo, dia Andriamanitr’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ka nanao hoe: Efa namangy anareo tokoa Aho ka nahita ny anaovana anareo atỳ Egypta;
17 ary hoy Izaho: Hitondra anareo hiakatra Aho ho afaka amin’ny fahoriana atỳ Egypta ho any amin’ny tanin’ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita, ho any amin’izay tany tondra-dronono sy tantely.
18 Dia hihaino ny feonao izy; ary hankao amin’ny mpanjakan’i Egypta ianao sy ny loholon’ny Isiraely ka hilaza aminy hoe: Jehovah, Andriamanitry ny Hebreo, efa nihaona taminay; ary ankehitriny, trarantitra ianao, aoka handeha lalan-kateloana any an-efitra izahay mba hamono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah Andriamanitray.
19 Kanefa Izaho mahalala fa tsy havelan’ny mpanjakan’i Egypta handeha ianareo, tsia, na dia amin’ny tanana mahery aza.
20 Dia haninjitra ny tanako Aho ka hamely an’i Egypta amin’ny fahagagana rehetra izay hataoko eo aminy; ary rehefa afaka izany, dia vao handefa anareo izy.
21 Ary hataoko mahita fitia eo imason’ny Egyptiana ity firenena ity, ka raha handeha ianareo, dia tsy mba handeha maina;
22 fa ny vehivavy samy hangataka firavaka volafotsy sy volamena ary fitafiana amin’ny miray monina aminy sy amin’izay mivahiny ao an-tranony; dia hataonareo amin’ny zanakareo-lahy sy ny zanakareo-vavy izany, ka dia hofoananareo ny Egyptiana.
3 Ary hoy Izy: Atsipazo amin’ny tany iny. Dia natsipiny tamin’ny tany ka tonga menarana, dia nandositra azy Mosesy.
4 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Ahinjiro ny tananao, ka raiso amin’ny rambony iny, dia naninjitra ny tànany izy ka nandray azy; dia tonga tehina teo an-tànany indray izy
5 mba hinoan’ireo fa efa niseho taminao Jehovah, Andriamanitry ny razany, dia Andriamanitr’i Abrahama sy Andriamanitr’Isaka ary Andriamanitr’i Jakoba.
7 Ary hoy koa Izy: Atsofohy ao an-tratranao indray ny tananao (dia natsofony tao an-tratrany indray ny tànany; ary nony notsoahany tamin’ny tratrany, dia, indro, efa tonga tahaka ny hodiny indray izy).
8 Ary raha tsy hino anao izy ka tsy hihaino ny feon’ny famantarana voalohany, dia hino ny feon’ny famantarana aoriana izy.
9 Ary raha tsy hino izany famantarana roa izany aza izy, na hihaino ny feonao, dia haka rano avy ao Neily ianao, ka haidinao amin’ny tany maina; ary izay rano alainao avy ao Neily dia ho tonga rà eo amin’ny tany maina.
10 Ary hoy Mosesy tamin’i Jehovah: Tompo ô, mifona aminao aho, olona tsy mahay mandaha-teny aho, na hatrany aloha, na hatramin’izao itenenanao amin’ny mpanomponao izao aza; fa votsa vava sy miadam-piteny aho.
11 Ary hoy Jehovah taminy; Iza moa no nanao ny vavan’ny olona? ary iza no mampahamoana, na mampaharenina, na mampahiratra, na mampahajamba? tsy Izaho Jehovah va
14 Dia nirehitra tamin’i Mosesy ny fahatezeran’i Jehovah, ka hoy Izy: Tsy ao ihany va Arona Levita rahalahinao? fantatro fa mahay mandaha-teny izy. Ary indro koa, avy hitsena anao izy; koa rehefa mahita anao izy, dia ho faly ny fony.
16 Ary izy hiteny amin’ny olona hisolo anao; ka dia izy no ho solovavanao, ary ianao kosa ho solon’Andriamanitra aminy.
18 Dia lasa nandeha Mosesy ka niverina ho any amin’i Jetro rafozany ka nanao taminy hoe: Masìna ianao, aoka aho handeha hiverina ho any amin’ny rahalahiko, izay any Egypta, ka hizaha na mbola velona ihany izy, na tsia. Ary hoy Jetro tamin’i Mosesy: Mandehana soa aman-tsara.
19 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy tany Midiana: Mandehana miverina any Egypta, fa maty ny olona rehetra izay nitady ny ainao.
20 Dia nalain’i Mosesy ny vadiny sy ny zananilahy ka nampitaingeniny boriky, dia niverina ho any amin’ny tany Egypta izy; ary nentin’i Mosesy teny an-tànany ilay tehin’Andriamanitra.
21 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Raha mandeha miverina ho any Egypta ianao, indreo ireo fahagagana rehetra ireo, izay nataoko eo an-tananao, dia ataovy eo anatrehan’i Farao; ary Izaho hanamafy ny fony, ka tsy handefa ny olona izy.
22 Ary lazao amin’i Farao hoe: Izao no lazain’i Jehovah: Zanako lahimatoa Isiraely;
24 Ary nony tany an-dalana tao amin’ny fandriam-bahiny izy, dia nitsena azy Jehovah ka nitady hamono azy.
25 Dia naka fiharatra vato Zipora ka namora ny zanany, ary izay nesoriny dia natsipiny teo anilan’ny tongony, ka hoy izy: Efa vady azoko amin’ny fandatsahan-drà ianao.
26 Dia niala taminy Izy; ary hoy ravehivavy: Vady azo amin’ny fandatsahan-drà ianao, noho ny fora.
27 Ary hoy Jehovah tamin’i Arona: Mandehana hitsena an’i Mosesy any an-efitra. Dia lasa nandeha izy ka nifanena taminy tao amin’ny tendrombohitr’Andriamanitra, dia nanoroka azy.
28 Ary nambaran’i Mosesy tamin’i Arona izay teny rehetra efa nanirahan’i Jehovah azy sy izay famantarana rehetra efa nandidiany azy.
29 Dia lasa nandeha Mosesy sy Arona ka nanangona ny loholon’ny Zanak’Isiraely rehetra.
30 Dia nolazain’i Arona ny teny rehetra izay efa nolazain’i Jehovah tamin’i Mosesy, sady nataony teo imason’ny olona ny famantarana.
31 Dia nino ny olona; ary rehefa reny fa Jehovah efa namangy ny Zanak’Isiraely ka efa nitsinjo ny fahoriany, dia niondrika izy ka niankohoka.
1 [Ny nihaonan’i Mosesy sy Arona tamin’i Farao, sy ny nampitomboan’i Farao, ny fanompoan’ny Zanak’Isiraely] Ary rehefa afaka izany, Mosesy sy Arona dia nankao amin’i Farao ka niteny taminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho Ahy any an-efitra.
3 Ary hoy izy roa lahy: Andriamanitry ny Hebreo efa nihaona taminay; koa trarantitra ianao, aoka handeha lalan-kateloana any an-efitra izahay hamono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah Andriamanitray; fandrao Izy hamely anay amin’ny areti-mandringana, na amin’ny sabatra.
4 Ary hoy ny mpanjakan’i Egypta taminy: Nahoana ianareo, ry Mosesy sy Arona, no manaketraka ny olona amin’ny asany? mandehana any amin’ny fanompoanareo mafy.
5 Ary hoy koa Farao: Indro, efa maro ankehitriny ny olona eto amin’ny tany, ka ianareo mampitsahatra azy amin’ny fanompoany mafy.
6 Ary tamin’izany andro izany Farao nandidy ny mpampiasa ny olona mbamin’ny mpifehy azy ka nanao hoe:
8 Kanefa ny isan’ny biriky izay fanaony teo aloha dia mbola hampanaovinareo azy ihany, fa aza ahenanareo; fa malaina izy, koa izany no itarainany hoe: Aoka izahay handeha hamono zavatra hatao fanatitra ho an’Andriamanitray.
9 Hamafio ny fanompoan’ny olona mba hifotorany amin’izany, fa aza avela hihaino izay lainga foana izy.
10 Dia nivoaka ny mpampiasa ny olona mbamin’ny mpifehy azy ka niteny tamin’ny olona nanao hoe: Izao no lazain’i Farao: Izaho tsy mba hanome mololo anareo intsony;
11 fa mandehana ianareo ka manangona mololo any amin’izay hahitanareo, satria tsy hahena ny fanompoanareo na dia kely akory aza.
12 Dia niely eran’ny tany Egypta rehetra ny olona mba hifako vodivary ho solon’ny mololo.
13 Ary ny mpampiasa nandodona azy ka nanao hoe: Vitao ny asanareo, izay anjara-fanompoana isan’andro, tahaka ny fony mbola nisy mololo ihany.
14 Ary ny mpifehy ny Zanak’Isiraely, izay notendren’ny mpampiasa avy amin’i Farao mba hifehy azy, dia nokapohina ka nanontaniana hoe: Ahoana no tsy nahavitanareo ny anjaranareo tamin’ny fanaovana ny biriky omaly sy androany, tahaka ny teo aloha ?
15 Dia nankao amin’i Farao ny mpifehy ny Zanak’Isiraely ka nitaraina taminy hoe: Nahoana no manao toy izany amin’ny mpanomponao ianao?
17 Fa hoy Farao: Malaina dia malaina ianareo, ka izany no anaovanareo hoe: Aoka handeha izahay hamono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah.
19 Ary hitan’ny mpifehy ny Zanak’Isiraely fa efa azon-doza izy noho ny nanaovana hoe: Tsy hahenanareo ny isan’ny birikinareo amin’ny anjara-fanompoana isan’andro.
20 Ary izy ireo dia nihaona tamin’i Mosesy sy Arona, izay nijanona niandry azy, raha avy tany amin’i Farao izy;
21 dia hoy izy tamin’izy roa lahy: Jehovah anie hijery sy hitsara anareo, satria efa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan’i Farao sy eo anatrehan’ny mpanompony izahay, ka nasianareo sabatra eo an-tànany hamonoany anay.
22 Ary Mosesy niverina ho any amin’i Jehovah ka nanao hoe: Tompo ô, nahoana no nahatonga loza tamin’ity firenena ity Hianao? nahoana re no naniraka ahy Hianao?
23 Fa hatrizay nankanesako tao amin’i Farao mba hiteny amin’ny anaranao izay, dia nahatonga loza tamin’ity firenena ity izy; nefa tsy namonjy ny olonao akory Hianao.
1 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Ankehitriny ho hitanao izay hataoko amin’i Farao; fa ny tanako mahery no handefasany azy, ary ny tanako mahery no handroahany azy amin’ny taniny.
2 [Ny namerenan’Andriamanitra ny teniny tamin’i Mosesy] Ary Andriamanitra niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: Izaho no Jehovah;
3 ary tamin’ny anarako hoe ANDRIAMANITRA TSITOHA no nisehoako tamin’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe JEHOVAH tsy mbola nahafantarany Ahy,
5 Ary koa, Izaho efa nandre ny fitarainan’ny Zanak’Isiraely, izay ampanompoin’ny Egyptiana, ka dia tsaroako ny fanekeko.
6 Koa lazao amin’ny Zanak’Isiraely hoe: Izaho no Jehovah, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin’ny fanompoana mafy ampanaovin’ny Egyptiana anareo Aho ka hanafaka anareo amin’ny fanompoana azy; ary sandry ahinjitra sy fitsarana lehibe no hamonjeko anareo.
7 Dia halaiko ho Ahy ianareo ho oloko, ary ho Andriamanitrareo Aho; dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, Izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin’ny fanompoana mafy ampanaovin’ny Egyptiana anareo.
8 Ary Izaho hampiditra anareo any amin’ny tany izay nananganako tanàna homena an’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba; dia homeko ho lovanareo izany: Izaho no Jehovah.
9 Ary Mosesy nilaza izany tamin’ny Zanak’Isiraely; nefa izy tsy nihaino an’i Mosesy noho ny fahoriam-panahy sy ny fanompoana mafy.
10 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe:
11 Mankanesa ao amin’i Farao, mpanjakan’i Egypta, ka mitenena aminy mba handefasany ny Zanak’Isiraely hiala amin’ny taniny.
12 Ary Mosesy niteny teo anatrehan’i Jehovah ka nanao hoe: Indro, ny Zanak’Isiraely aza tsy nihaino ahy, ka ahoana no hihainoan’i Farao ahy, fa izaho tsy voafora molotra?
13 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy sy Arona ka nanome teny azy ho entiny ho any amin’ny Zanak’Isiraely sy ho amin’i Farao, mpanjakan’i Egypta, mba hitondra ny Zanak’Isiraely hivoaka avy amin’ny tany Egypta.
14 [Ny firazanan’i Mosesy sy Arona] Izao no lohan’ny fianakaviany: Ny zanakalahin-dRobena, lahimatoan’Isiraely, dia Hanoka sy Palo sy Hezrona sy Karmy; ireo no fokom-pirenen-dRobena.
15 Ary ny zanakalahin’i Simeona dia Jemoela sy Jaminasy Ohada sy Jakinasy Zohara ary Saoly, zanakalahin’ny vehivavy Kananita; ireo no fokom-pirenen’i Simeona.
16 Ary izao no anaran’ny zanakalahin’i Levy, araka ny taranany, dia Gersona sy Kehata ary Merary; ary ny andro niainan’i Levy dia fito amby telo-polo amby zato taona.
17 Ny zanakalahin’i Hersona dia Libny sy Simey, araka ny fokom-pireneny.
18 Ary ny zanakalahin’i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela; ary ny andro niainan’i Kehata dia telo amby telo-polo amby zato taona.
19 Ary ny zanakalahin’i Merary dia Maly sy Mosy. Ireo no fokom-pirenen’ny Levita, araka ny taranany.
20 Ary Amrama naka an’i Jokebeda anabavin-drainy ho vadiny, dia niteraka an’i Arona sy Mosesy taminy izy; ary ny andro niainan’i Amrama dia fito amby telo-polo amby zato taona.
21 Ary ny zanakalahin’i Jizara dia Kora sy Nafega ary Zikry.
22 Ary ny zanakalahin’i Oziela dia Misaela sy Elzafana ary Sitry.
23 Ary Arona naka an’i Eliseba, zanakavavin’i Aminadaba sady anabavin’i Nasona, ho vadiny; dia niteraka an’i Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara taminy izy.
24 Ary ny zanakalahin’i Kora dia Asira sy Elkana ary Abiasafa; ireo no fokom-pirenen’ny Korana.
25 Ary Eleazara, zanakalahin’i Arona, naka vady avy tamin’ny zanakavavin’i Potiela, dia niteraka an’i Finehasa taminy izy. Ireo no lohan’ny fianakavian’ny Levita, araka ny fokom-pireneny.
26 Ireo no Arona sy Mosesy, izay nilazan’i Jehovah hoe: Ento ny Zanak’Isiraely hivoaka avy any amin’ny tany Egypta araka ny antokony.
27 Ireo no niteny tamin’i Farao, mpanjakan’i Egypta, mba hitondra ny Zanak’Isiraely hivoaka avy any Egypta; ireo no Mosesy sy Arona.
28 [Ny nanirahan’Andriamanitra an’i Mosesy sy Arona hihaona amin’i Farao indray, sy ny famantarana nataon’izy roa lahy teo anatrehany] Ary tamin’ny andro izay nitenenan’i Jehovah tamin’i Mosesy teo amin’ny tany Egypta,
29 dia hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Izaho no Jehovah; koa lazao amin’i Farao, mpanjakan’i Egypta, izay rehetra lazaiko aminao.
30 Ary Mosesy niteny teo anatrehan’i Jehovah ka nanao hoe: Indro, tsy voafora molotra aho, ka aiza no hihainoan’i Farao ahy!
1 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Indro, efa nataoko andriamanitra ho an’i Farao ianao; ary Arona rahalahinao kosa ho mpaminaninao.
2 Hianao hilaza izay rehetra nandidiako anao, ary Arona rahalahinao kosa hilaza amin’i Farao, mba handefasany ny Zanak’Isiraely hiala amin’ny taniny,
3 Ary Izaho hanamafy ny fon’i Farao sy hanamaro ny famantarana sy ny fahagagana izay hataoko eto amin’ny tany Egypta.
4 Fa tsy hihaino anareo Farao, ka dia hamely an’i Egypta ny tanako, ary fitsarana lehibe no hitondrako ny antokon’ny Zanak’Isiraely oloko hiala amin’ny tany Egypta.
5 Dia ho fantatry ny Egyptiana fa Izaho no Jehovah, rehefa maninjitra ny tanako amin’i Egypta Aho ka mitondra ny Zanak’Isiraely hivoaka avy any.
6 Dia nataon’i Mosesy sy Arona izany: araka izay nandidian’i Jehovah azy no natao­ny.
7 Ary efa valo-polo taona Mosesy, ary efa telo amby valo-polo taona kosa Arona, raha niteny tamin’i Farao izy mirahalahy.
8 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy sy Arona:
9 Raha miteny aminareo Farao ka manao hoe: Manaova fahagagana hanambara anareo, dia lazao amin’i Arona hoe: Raiso ny tehinao, ka atsipazo eo anatrehan’i Farao, dia ho tonga menarana iny.
10 Ary Mosesy sy Arona nankao amin’i Farao ka nanao araka izay efa nandidian’i Jehovah; dia natsipin’i Arona teo anatrehan’i Farao sy teo anatrehan’ny mpanompony ny tehiny, ka tonga menarana iny.
11 Dia nampanalain’i Farao ny olon-kendry sy ny mpanana ody; ary ireo ombiasy teo Egypta ireo dia nanao toy izany tamin’ny fankatovany.
12 Fa samy nanipy ny tehiny avy izy ireo, ka tonga menarana ireny; nefa ny tehin’i Arona nitelina ny tehin’ireo.
13 Dia nihamafy ny fon’i Farao, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, araka izay efa nolazain’i Jehovah.
14 [Ny loza folo loha namelezan’Andriamanitra ny tany Egypta. Voalohany: ny rano tonga rà] Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Efa mafy ny fon’i Farao, ka mandà tsy handefa ny olona izy.
15 Mankanesa ao aminy ianao rahampitso; indro, hivoaka ho any amin’ny rano izy; dia mijanona eo amoron’i Neily ianao ambara-pihaviny (ary ny tehina, ilay novàna ho menarana, ho entinao eny an-tananao),
17 Koa izao no lazain’i Jehovah: Izao no hahafantaranao fa Izaho no Jehovah: indro, ny tehiko etỳ an-tanako no hikapohako ny rano ao Neily, ka ho tonga rà izy.
18 Dia ho faty ny hazandrano ao Neily, ka ho maimbo Neily, ary tsy ho tian’ny Egyptiana intsony ny hisotro ny rano ao.
19 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Lazao amin’i Arona hoe: Raiso ny tehinao, ka ahinjiro ambonin’ny ranon’i Egypta ny tananao, dia ambonin’ny sampan-dranony sy ambonin’ny lahin-dranony, sy ambonin’ny heniheniny, ary ambonin’ny kamoriny rehetra, mba ho tonga rà ireny; ary hisy rà eran’ny tany Egypta rehetra, na amin’ny fitoeran-drano hazo na amin’ny fitoeran-drano vato.
20 Ary nataon’i Mosesy sy Arona izany, araka izay nandidian’i Jehovah; dia nanainga ny tehina izy ka namely ny rano tao Neily teo imason’i Farao sy teo imason’ny mpanompony, dia tonga rà ny rano rehetra tao Neily;
21 koa maty ny hazandrano izay tao Neily, dia maimbo Neily, ka tsy azon’ny Egyptiana nosotroina ny rano avy ao; ary ny rà dia nanerana ny tany Egypta rehetra.
22 Ary ny ombiasy teo Egypta, dia mba nanao toy izany koa tamin’ny fankatovany; ka dia nihamafy ny fon’i Farao, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, araka izay efa nolazain’i Jehovah.
24 Dia nihady rano hosotroiny teo amoron’i Neily ny Egyptiana rehetra; fa tsy azony nisotroana ny rano tao Neily.
25 Ary nisy hafitoana taorian’ny namelezan’i Jehovah an’i Neily.
26 [Faharoa: ny sahona] Dia hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Mankanesa ao amin’i Farao, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah: Alefaso ny oloko hanompo Ahy.
27 Fa raha mandà ka tsy mandefa azy ianao, indro, Izaho hamely ny taninao rehetra amin’ny sahona;
28 dia hisy sahona betsaka any Neily, ary hiakatra ireny ka hankao amin’ny tranonao sy ny trano fandrianao sy eny ambonin’ny farafaranao sy any amin’ny tranon’ny mpanomponao sy amin’ny vahoakanao ary eny amin’ny fanendasa-mofonao sy eny amin’ny vilia fanaova-mofonao.
29 Dia ho aminao sy ny vahoakanao ary ny mpanomponao rehetra no hiakaran’ny sahona.
1 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Lazao amin’i Arona hoe: Ahinjiro ny tananao mitana ny tehinao eny ambonin’ny sampan-drano ary eny ambonin ny lahin-drano sy ny heniheny, ka mampiakara ny sahona ho eny amin’ny tany Egypta.
2 Ary nahinjitr’i Arona tambonin’ny rano tany Egypta ny tànany; dia niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egypta.
3 Ary ny ombiasy mba nanao toy izany koa tamin’ny fankatovany ka nampiakatra ny sahona ho eny amin’ny tany Egypta.
4 Ary Farao dia nampaka an’i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: Mangataha amin’i Jehovah hampialany ny sahona amiko sy amin’ny vahoakako; dia halefako ny olona mba hamono any zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah.
5 Ary hoy Mosesy tamin’i Farao: Aoka hiseho ny voninahitrao noho izay hataoko; rahoviana no hangatahako ho anao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, hanesorana ny sahona aminao sy amin’ny tranonao, ka ho ao Neily ihany no hisy azy?
6 Dia hoy izy: Rahampitso. Ary hoy kosa izy: Aoka àry dia ho araka ny teninao, mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka an’i Jehovah Andriamanitray.
7 Ary ny sahona dia hiala aminao sy amin’ny tranonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, ka ho ao Neily ihany no hisy azy.
8 Ary Mosesy sy Arona niala teo amin’i Farao; ary Mosesy nitaraina tamin’i Jehovah ny amin’ny sahona izay efa nataony tamin’i Farao.
9 Dia nataon’i Jehovah araka ny tenin’i Mosesy, ka maty ny sahona teny amin’ny trano sy teny amin’ny tokotany ary tany an-tsaha.
11 Fa nony hitan’i Farao fa nisy hiainana, dia nanamafy ny fony izy ka tsy mba nihaino azy mirahalahy, dia araka izay efa nolazain’i Jehovah.
12 [Fahatelo: ny moka] Dia hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Lazao amin’i Arona hoe; Ahinjiro ny tehinao, ka kapohy ny vovo-tany, dia ho tonga moka eran’ny tany Egypta rehetra izany.
13 Dia nanao toy izany izy, ka nahinjitr’i Arona ny tànany mitana ny tehiny, ary nokapohiny ny vovo-tany, dia nisy moka teny amin’ny olona sy teny amin’ny biby fiompy: fa tonga moka avokoa ny vovo-tany rehetra eran’ny tany Egypta rehetra.
14 Ary mba nanao toy izany koa ny ombiasy tamin’ny fankatovany mba hahatonga moka, kanjo tsy nahay izy; ary ny moka dia teny amin’ny olona sy teny amin’ny biby fiompy.
15 Dia hoy ny ombiasy tamin’i Farao: Rantsan-tànan’Andriamanitra ity; nefa nihamafy ny fon’i Farao, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, dia araka izay efa nolazain’i Jehovah.
16 [Fahefatra: ny lalitra] Dia hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Mifohaza maraina koa, ka mitsangàna eo anatrehan’i Farao (fa, indro, hivoaka ho any amin’ny rano izy), ka lazao aminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah: Alefaso ny oloko hanompo Ahy.
17 Fa raha tsy mandefa ny oloko ianao, indro Aho handefa lalitra betsaka hamely anao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao; dia ho feno lalitra ny tranon’ny Egyptiana sy ny tany izay itoerany koa.
18 Fa havahako amin’izany andro izany ny tany Gosena, izay itoeran’ny oloko, ka tsy mba hisy lalitra ao, mba hahafantaranao fa Izaho no Jehovah afovoan’ny tany.
19 Dia hasiako fiavahana amin’ny oloko sy ny olonao; rahampitso no hisian’izany famantarana izany.
20 Ary nataon’i Jehovah izany; ka dia nisy lalitra be dia be tao amin’ny tranon’i Farao sy tao amin’ny tranon’ny mpanompony ary teny amin’ny tany Egypta rehetra; koa dia simba ny tany noho ny lalitra.
21 Ary Farao nampaka an’i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: Mandehana ianareo hamono zavatra hatao fanatitra ho an’Andriamanitrareo eto amin’ity tany ity.
22 Fa hoy Mosesy: Tsy azo atao izany; fa izay fadin’ny Egyptiana no hovonoinay hatao fanatitra ho an’i Jehovah Andriamanitray; koa, indro, raha izay fadin’ny Egyptiana no vonoinay eo imasony hatao fanatitra, moa tsy hotorahany vato va izahay?
23 Handeha lalan-kateloana any an-efitra izahay, dia hamono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah Andriamanitray, araka izay holazainy aminay.
24 Ary hoy Farao: Izaho dia handefa anareo ihany mba hamono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah Andriamanitrareo any an-efitra; fa hany ataoko: aza mandeha lavitra loatra ianareo; dia mangataha ho ahy.
25 Ary hoy Mosesy: Indro, izaho hiala eto aminao ka hangataka amin’i Jehovah mba hialan’ny lalitra amin’i Farao sy ny mpanompony ary ny vahoakany rahampitso; fa aoka kosa tsy hamitaka intsony Farao ka tsy handefa ny olona hamono zavatra hatao fanatitra ho an i’Jehovah.
26 Ary Mosesy niala teo amin’i Farao ka nangataka tamin’i Jehovah
27 Ary Jehovah dia nanao araka ny tenin’i Mosesy ka nampiala ny lalitra betsaka tamin’i Farao sy ny mpanompony ary ny vahoakany, ka tsy nisy niangana ireny na dia iray akory aza.
28 Ka­njo Farao nanamafy ny fony indray tamin’izany ka tsy nandefa ny olona.
1 [Fahadimy: ny aretina tamin’ny biby] Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Mankanesa ao amin’i Farao ianao, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Hebreo: Alefaso ny oloko hanompo Ahy.
3 dia, indro, ny tànan’i Jehovah ho amin’ny bibinao izay any an-tsaha, dia amin’ny soavaly sy amin’ny boriky sy amin’ny rameva sy amin’ny omby ary amin’ny ondry aman’osy, ka hisy areti-mandringana mafy indrindra.
4 Ary Jehovah dia hanavaka ny bibin’ny Isiraely amin’ny bibin’ny Egyptiana, ka tsy hisy maty izay rehetra an’ny Zanak’Isiraely na dia iray aza.
5 Dia nanendry fotoan’andro Jehovah ka nanao hoe: Rahampitso no hanaovan’i Jehovah izany zavatra izany eto amin’ny tany.
6 Ary nony ampitso dia nataon’i Jehovah izany zavatra izany; ka maty avokoa ny bibin’ny Egyptiana rehetra; fa ny bibin’ny Zanak’Isiraely kosa tsy mba nisy maty na dia iray akory aza.
7 Dia naniraka Farao, ka, indro, tsy mba nisy maty ny bibin’ny Zanak’Isiraely na dia iray akory aza, nefa nihamafy ny fon’i Farao, ka tsy nandefa ny olona izy.
8 [Fahenina: ny vay] Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy sy Arona: Mangalà lavenona amin’ny tananao ao amin’ny lafaoro lehibe, ary aoka hatopin’i Mosesy miakatra manandrify ny lanitra eo imason’i Farao izany.
9 Dia hitora-jofo eran’ny tany Egypta rehetra izany ka ho tonga vay mipoipoitra amin’ny olona sy amin’ny biby fiompy eran’ny tany Egypta rehetra.
10 Dia naka lavenona tamin’ny lafaoro lehibe izy roa lahy ka nitsangana teo anatrehan’i Farao; dia natopin’i Mosesy niakatra nanandrify ny lanitra izany, ka dia tonga vay nipoipoitra tamin’ny olona sy tamin’ny biby fiompy.
11 Ary ny ombiasy tsy nahajanona teo anatrehan’i Mosesy noho ny vay; fa ny vay dia nahazo ny ombiasy mbamin’ny Egyptiana rehetra.
12 Nefa Jehovah dia nanamafy ny fon’i Farao, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, dia araka izay efa nolazain’i Jehovah tamin’i Mosesy.
13 [Fahafito: ny havandra] Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Mifohaza maraina koa ianao dia mitsangana eo anatrehan’i Farao, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Hebreo: Alefaso ny oloko hanompo Ahy
14 Fa ankehitriny izao dia halefako ny areti-mandringana rehetra avy atỳ amiko hamely ny fonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka Ahy amin’ny tany rehetra.
15 Fa ankehitriny, raha izay Aho no naninjitra ny tanako hamely anao sy ny vahoakanao amin’ny areti-mandringana, dia efa fongotra tamin’ny tany ianao.
16 Kanefa izao indrindra no nampaharetako anao, dia ny hampahita anao ny heriko mba hambara any amin’ny tany rehetra ny anarako.
17 Mbola mirehareha amin’ny oloko ihany va ianao ka tsy handefa azy?
18 Indro, rahampitso toy izao dia hampilatsaka havandra be dia be Aho, izay tsy mbola nisy toy izany teto Egypta hatramin’ny andro nisiany mponina ka mandraka ankehitriny.
19 Koa ankehitriny, maniraha mba hanangona faingana ny bibinao sy izay rehetra anananao any an-tsaha; fa ny olona rehetra sy ny biby fiompy izay ho hita any an-tsaha ka tsy ho enti-mody dia hilatsahan’ny havandra ka ho faty avokoa.
20 Ary izay natahotra ny tenin’i Jehovah teo amin’ny mpanompon’i Farao dia nampody ny mpanompony sy ny bibiny ho any an-trano;
21 fa izay tsy nandatsaka am-po ny tenin’i Jehovah kosa dia namela ny mpanompony sy ny bibiny tany an-tsaha ihany.
22 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Ahinjiro manandrify ny lanitra ny tananao, dia hisy havandra hilatsaka amin’ny tany Egypta rehetra, dia amin’ny olona sy amin’ny biby fiompy ary amin’ny anana rehetra any an-tsaha eran’ny tany Egypta.
23 Dia nahinjitr’i Mosesy manandrify ny lanitra ny tehiny; ary Jehovah nanisy kotrokorana sy havandra, ary nisy afo nifanaretsadretsaka teny ambonin’ny tany; ary Jehovah nandatsaka havandra tamin’ny tany Egypta.
24 Dia nisy havandra sy afo nifandrambondrambona tanelanelan’ny havandra; dia mafy indrindra izany, ka tsy mbola nisy toy izany tany amin’ny tany Egypta rehetra hatrizay naha-firenena azy.
25 Ary ny havandra namely izay rehetra tany an-tsaha, na olona na biby fiompy, eran’ny tany Egypta rehetra; ny anana rehetra tany an-tsaha dia nasian’ny havandra koa, ary ny hazo rehetra tany an-tsaha notapatapahiny.
26 Fa tao amin’ny tany Gosena izay nitoeran’ny Zanak’Isiraely ihany no tsy mba nisy havandra.
27 Dia naniraka Farao nampaka an’i Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe: Efa nanota aho tamin’izao, ka Jehovah no marina, fa izaho sy ny vahoakako no meloka.
28 Mangataha amin’i Jehovah, fa aoka izay ny kotrokorana sy ny havandra, dia halefako tsy hitoetra eto intsony ianareo.
29 Ary hoy Mosesy taminy: Raha vao mivoaka amin’ny tanàna aho, dia hamelatra ny tanako amin’i Jehovah; koa dia hitsahatra ny kotrokorana, ary ny havandra dia tsy hisy intsony, mba hahafantaranao fa an’i Jehovah ny tany.
30 Kanefa fantatro fa ianao sy ny mpanomponao dia tsy mbola hatahotra an’i Jehovah Andriamanitra ihany.
33 Ary Mosesy niala teo amin’i Farao ka nankeo ivelan’ny tanàna, dia namelatra ny tànany tamin’i Jehovah, ka dia nitsahatra ny kotrokorana sy ny havandra, ary tsy nisy ranonorana nilatsaka tamin’ny tany intsony.
34 Ary nony hitan’i Farao fa nitsahatra ny ranonorana sy ny havandra ary ny kotrokorana, dia mbola nanota ihany indray izy; ary samy nanamafy ny fony izy sy ny mpanompony.
35 Dia nihamafy ny fon’i Farao ka tsy mba nandefa ny Zanak’Isiraely izy, araka izay efa nampilazain’i Jehovah an’i Mosesy.
1 [Fahavalo: ny valala] Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Mankanesa ao amin’i Farao; fa Izaho efa nanamafy ny fony sy ny fon’ny mpanompony, mba hanehoako izao famantarako izao eo aminy;
2 ary mba holazainao ho ren’ny zanakao sy ny zafinao izay zavatra nataoko teto Egypta sy izay famantarana nataoko teo aminy, mba ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
3 Ary Mosesy sy Arona dia nankao amin’i Farao ka nanao taminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Hebreo: Mandrapahoviana no handavanao tsy hanetry tena eo anatrehako? alefaso ny oloko mba hanompo Ahy.
4 Fa raha mandà ka tsy mandefa ny oloko ianao, indro, hahatonga valala amin’ny taninao rehetra Aho rahampitso;
5 dia handrakotra ny tany rehetra ireny, ka tsy ho hita ny tany; dia hohaniny ny sisan’ny havandra, izay navela ho anareo, ka hohaniny avokoa ny hazo rehetra izay maniry ho anareo any an-tsaha;
6 dia hameno ny tranonao sy ny tranon’ny mpanomponao rehetra ary ny tranon’ny Egyptiana rehetra ireny; ary tsy mbola hitan’ny rainao na ny raibenao izay toy izay hatr’izay andro niainany tetỳ ambonin’ny tany ka mandraka androany. Dia nihodina izy ka niala teo amin’i Farao.
7 Ary hoy ny mpanompon’i Farao taminy: Mandra-pahoviana no ho fandrika amintsika iny lehilahy iny? alefaso ireo olona ireo hanompo an’i Jehovah Andriamaniny; tsy mbola fantatrao va fa efa simba Egypta?
8 Dia nisy nampiverina an’i Mosesy sy Arona hankao amin’i Farao indray: ary hoy izy taminy: Mandehana, manompo an’i Jehovah Andriamanitrareo; nefa iza avy moa no handeha?
9 Ary hoy Mosesy: Ny tanora sy ny antitra aminay ho entinay handeha, ary ny zanakai-lahy sy ny zanakai-vavy sy ny ondry aman’osinay ary ny ombinay ho entinay handeha; fa hisy andro firavoravoanay ho an’i Jehovah.
10 Fa hoy Farao taminy: Aoka homba anareo ihany anie Jehovah, raha handefa anareo mbamin’ny zanakareo madinika aho; mitandrema, fa misy ratsy eo anoloanareo.
11 Tsy izany, fa mandehana ianareo lehilahy lehibe ka manompoa an’i Jehovah, fa izany no tadiavinareo. Ary izy roa lahy dia noroahina hiala teo anatrehan’i Farao.
12 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Ahinjiro ambonin’ny tany Egypta ny tananao hihavian’ny valala, dia hiakatra ho eto amin’ny tany Egypta ireny, ary dia hihinana ny zava-maniry amin’ny tany, dia izay rehetra sisan’ny havandra.
13 Dia nahinjitr’i Mosesy tambonin’ny tany Egypta ny tehiny, ary Jehovah nitondra rivotra avy any atsinanana hankany amin’ny tany mandritra iny andro sy iny alina iny; ary nony maraina dia nitondra ny valala ny rivotra avy any atsinanana.
14 Ary ny valala niakatra ho amin’ny tany Egypta rehetra, dia nipetraka nanerana ny tany Egypta rehetra; ary nampahory indrindra ireny, ka tsy nisy valala toy izany tany aloha, ary ato aoriany koa tsy hisy toy izany.
15 Fa nandrakotra ny tany rehetra ireny, ka efa maizina ny tany; ary nohaniny ny anana rehetra teo amin’ny tany sy ny voankazo rehetra, izay sisan’ny havandra; ka dia tsy nisy sisa ny zava-maitso eran’ny tany Egypta rehetra, na tamin’ny hazo, na tamin’ny anana tany an-tsaha.
16 Ary Farao dia nampaka an’i Mosesy sy Arona faingana ka nanao hoe: Efa nanota tamin’i Jehovah Andriamanitrareo sy taminareo aho.
17 Ary ankehitriny, masìna ianao mamela ny fahotako izao indray mandeha izao ihany, ka mangataha amin’i Jehovah Andriamanitrareo hampialany amiko izao mahafaty iray loha izao monja.
18 Dia niala teo amin’i Farao izy ka nangataka tamin’i Jehovah.
19 Ary Jehovah nahatonga rivotra mahery indrindra avy andrefana kosa, izay nitondra ny valala ka namarina azy tao amin’ny Ranomasina Mena; dia tsy nisy sisa intsony ny valala eran’ny tany Egypta rehetra, na dia iray akory aza.
20 Nefa Jehovah nanamafy ny fon’i Farao, ka tsy nandefa ny Zanak’Isiraely izy.
21 [Fahasivy: ny aizim-pito] Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Ahinjiro manandrify ny lanitra ny tananao, mba hisy aizina amin’ny tany Egypta, dia aizina azo tsapaina.
22 Dia nahinjitr’i Mosesy nanandrify ny lanitra ny tànany; dia nisy aizim-pito eran’ny tany Egypta rehetra hateloana,
23 koa tsy mba nifankahita ny olona, na niala tamin’izay nitoerany, hateloana; fa ny Zanak’Isiraely rehetra kosa nisy mazava teo amin’ny fonenany.
24 Ary Farao dia nampaka an’i Mosesy ka nanao hoe: Mandehana ianareo, manompoa an’i Jehovah; fa ny ondry aman’osinareo sy ny ombinareo ihany no aoka havelanareo; ary ny zanakareo madinika dia aoka hiaraka aminareo koa.
25 Ary hoy Mosesy: Hianao no hanolotra eto an-tananay izay fanatitra dorana sy fanatitra hafa alatsa-drà haterinay ho an’i Jehovah Andriamanitray;
26 ary ny omby aman’ondrinay dia ho entinay hiaraka aminay koa; fa tsy hisy havela na dia ny kitrony iray aza, satria ireny no hangalanay hanompoana an’i Jehovah Andriamanitray; ary tsy mbola fantatray izay ho entinay manompo an’i Jehovah mandra-pahatonganay any.
27 Ary Jehovah dia nanamafy ny fon’i Farao, ka tsy nety nandefa azy izy.
28 Ary hoy Farao taminy: Mialà amiko; koa mitandrema, fa aoka tsy hahita ny tavako intsony ianao; fa amin’izay andro hahitanao ny tavako dia ho faty ianao.
1 [Filazana ny hihavian’ny loza fahafolo] Fa Jehovah nilaza tamin’i Mosesy, hoe: Mbola hahatonga loza iray koa amin’i Farao sy Egypta Aho; ary rehefa afaka izany, dia handefa anareo hiala atỳ izy; ary rehefa handefa anareo rehetra izy, dia handroaka anareo fatratra hiala atỳ.
2 Koa mitenena amin’ny olona, ary aoka ny lehilahy samy hangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena amin’ny namany avy, ary ny vehivavy amin’ny namany avy koa.
3 Dia nataon’i Jehovah nahita fitia teo imason’ny Egyptiana ny olona. Ary Mosesy dia lehilahy malaza indrindra teo amin’ny tany Egypta, dia teo imason’ny mpanompon’i Farao sy teo imason’ny vahoaka.
4 Ary hoy Mosesy: Izao no lazain’i Jehovah: Rehefa tokony ho mamatonalina Izaho hivoaka hankeo afovoan’i Egypta,
5 dia ho faty ny lahimatoa rehetra eto amin’ny tany Egypta, hatramin’ny matoan’i Farao izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianany ka hatramin’ny matoan’ny ankizivaviny izay eo anilan’ny fikosoham-bary, ary ny voalohan-teraky ny biby fiompy rehetra.
6 Ary hisy fidradradradrana mafy eran’ny tany Egypta rehetra, izay tsy mbola nisy tahaka izany, sady tsy hisy tahaka izany intsony.
7 Kanefa tsy hisy na dia alika aza hanetsika ny lela ny amin’ny Zanak’Isiraely rehetra, na amin’ny olona, na amin’ny biby, mba ho fantatrareo ny tsi-fampitovian’i Jehovah ny Egyptiana sy ny Isiraely.
8 Ary hidina ho ao amiko ireo mpanomponao rehetra ireo dia hiankohoka eo anatrehako ka hanao hoe: Mandehana ianao sy ny olona rehetra izay manaraka anao; ary rehefa afaka izany, dia vao handeha aho. Dia niala teo amin’i Farao tamin’ny fahatezerana mirehitra Mosesy.
9 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Tsy hihaino anareo Farao, mba hitomboan’ny fahagagana izay hataoko eto amin’ny tany Egypta.
10 Ary Mosesy sy Arona nanao ireo fahagagana rehetra ireo teo amin’i Farao; nefa Jehovah nanamafy ny fon’i Farao, ka tsy nandefa ny Zanak’Isiraely hiala tamin’ny taniny izy.
1 [Ny Paska, sy ny loza fahafolo, izay nahafaty ny lahimatoa rehetra teo Egypta] Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy sy Arona teo amin’ny tany Egypta ka nanao hoe:
2 Ity volana ity ho voaloham-bolana ho anareo; dia ho voaloham-bolana amin’ny taona ho anareo izy.
3 Mitenena ianareo amin’ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra, ka manaova hoe: Amin’ny andro fahafolo amin’ity volana ity dia aoka samy haka zanak’ondry iray avy izy rehetra, araka ny fianakaviany, dia zanak’ondry iray avy no ho an’ny isan-trano;
4 ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak’ondry iray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy haka araka izay isan’ny olona; ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no hanisanareo ny zanak’ondry.
5 Zanak’ondry tsy misy kilema, dia lahy izay iray taona, no halainareo; halainareo amin’ny ondry na amin’ny osy izy;
6 ary hotehirizinareo izy hatramin’ny andro fahefatra ambin’ny folo amin’ity volana ity; dia hamono azy amin’ny hariva ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra.
7 Ary hanalany ny rà, ka hatentiny amin’ny tolam-baravarana roa sy amin’ny tataom-baravaran’ny trano izay hihinanany azy.
8 Dia hohaniny amin’izany alina izany ny hena; voatsatsika tamin’ny afo no hihinanany azy mbamin’ny mofo tsy misy masirasira sady hampiarahina amin’ny anana mangidy.
9 Aza hanina manta na voahandro amin’ny rano izy, fa atsatsiho amin’ny afo mbamin’ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny.
10 Ary aza asianareo sisa ho tra-maraina; fa raha tahìny misy sisa tsy lany ka tra-maraina, dia hodoranareo amin’ny afo.
11 Ary toy izao no hataonareo, raha mihinana azy: ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin’ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny an-tananareo; dia hohaninareo faingana izy, fa Paskan’i Jehovah.
12 Fa handeha hamaky ny tany Egypta amin’izany alina izany Aho ka hamono ny matoa rehetra amin’ny tany Egypta hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby fiompy; ary ny andriamanitry ny Egyptiana dia hotsaraiko avokoa: Izaho no Jehovah.
13 Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin’ny trano izay itoeranareo; ary raha mahita ny rà Aho, dia handalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo, raha mamely ny tany Egypta Aho.
14 Ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka hotandremanareo ho andro firavoravoana ho an’i Jehovah; hatramin’ny taranakareo fara mandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana, ho lalana mandrakizay.
15 Hafitoana no hihinananareo mofo tsy misy masirasira: amin’ny voalohan’andro no hanesoranareo ny masirasira amin’ny tranonareo; fa na iza na iza homana mofo misy masirasira hatramin’ny andro voalohany ka hatramin’ny fahafito dia hofongorana tsy ho amin’ny Isiraely.
16 Ary amin’ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo ary amin’ny andro fahafito koa hisy fivoriana masina; tsy hanao raharaha akory ianareo amin’izany andro izany, afa-tsy izay hohanin’ny isan-olona, dia izany ihany no hamboarinareo.
17 Ary hitandrina ny andron’ny mofo tsy misy masirasira ianareo, fa izany andro izany indrindra no nitondrako ny antokonareo nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta; dia hotandremanareo izany hatramin’ny taranakareo fara mandimby ho lalàna mandrakizay.
18 Amin’ny andro fahefatra ambin’ny folo amin’ny volana voalohany, nony hariva, no hihinananareo mofo tsy misy masirasira ambara-paharivan’ny andro fahiraika amby roa-polo amin’ny volana.
19 Hafitoana no tsy hisiana masirasira ao an-tranonareo; fa na iza na iza homana izay misy masirasira dia hofongorana tsy ho amin’ny fiangonan’ny Isiraely, na vahiny na tompon-tany.
20 Tsy hihinana na inona na inona izay misy masirasira ianareo; fa samy hihinana mofo tsy misy masirasira ao amin’izay itoeranareo rehetra avy ianareo.
21 Dia nampanalain’i Mosesy ny loholon’ny Isiraely rehetra, ka hoy izy taminy: Mandehana ianareo ka makà ondry ho anareo araka ny fokom-pirenenareo avy, ka vonoy ny Paska.
22 Dia makà hysopa iray fihina, ka atsobohy amin’ny rà izay ao anatin’ny bakoly ary ny rà izay ao anatin’ny bakoly dia anenteno amin’ny tataom-baravarana sy ny tolana roa; ary aza misy mivoaka eo am-baravaran’ny tranonareo avy ianareo ambara-pahamarain’ny andro.
23 Fa Jehovah handeha hamely ny Egyptiana; ary raha mahita ny rà eo amin’ny tataom-baravarana sy ny tolana roa Jehovah, dia handalo ny varavarana, ka tsy havelany hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana.
24 Ary hitandrina izany zavatra izany, ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an’ny taranakareo mandrakizay.
25 Ary rehefa tonga any amin’ny tany izay homen’i Jehovah anareo araka izay nolazainy ianareo, dia tandremo izany fanompoana izany.
26 Ary raha hanontany anareo ny zanakareo hoe: Inona no anton’izao fanompoana ataonareo izao?
27 dia holazainareo hoe: Izao dia famonoana ny Paskan’i Jehovah, Izay nandalo ny tranon’ny Zanak’Isiraely tany Egypta, raha namely ny Egyptiana Izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika. Dia niondrika ny olona ka nivavaka.
28 Ary dia nandeha ny Zanak’Isiraely ka nanao izany; araka izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy sy Arona no nataony.
29 Ary nony namatonalina Jehovah namono ny lahimatoa rehetra tany amin’ny tany Egypta, hatramin’ny lahimatoan’i Farao izay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianany ka hatramin’ny lahimatoan’ny babo izay tao amin’ny trano-maizina, mbamin’izay voalohan-teraky ny biby fiompy rehetra.
31 Dia nampaka an’i Mosesy sy Arona izy, raha mbola alina, ka nanao hoe: Mitsangàna, mialà eto amin’ny vahoakako ianareo sy ny Zanak’Isiraely, ary mandehana ka manompoa an’i Jehovah araka ny nolazainareo.
32 Ary ny ondry aman’osinareo sy ny ombinareo dia ento koa araka izay efa nolazainareo, ka mandehana; fa mba tsofy rano aho.
33 Dia nandodona ny olona ny Egyptiana ka nampandeha azy faingana hiala tamin’ny tany, satria hoy izy: Maty avokoa izahay rehetra.
34 Dia nentin’ny olona ny kobany voalena, raha tsy mbola voaisy masirasira, sy ny viliany fanaova-mofo voafehy ao amin’ny lambany teny an-tsorony.
35 Ary ny Zanak’Isiraely nanao araka ny tenin’i Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin’ny Egyptiana.
36 Ary nataon’i Jehovah nahita fitia teo imason’ny Egyptiana ny olona, ka nomen’ireo azy izay nangatahiny, ka dia nofoanany ny Egyptiana.
37 Dia niainga tao Ramesesa ny Zanak’Isiraely ka nankany Sokota, dia lehilahy mahalia lalana tokony ho enina hetsy, afa-tsy ny zaza amim-behivavy.
38 Ary nisy olona maro samy hafa firenena koa niara-niakatra taminy, ary ondry aman’osy sy omby, dia fananana be indrindra.
39 Dia nanendy mofo tsy nisy masirasira tamin’ny koba voalena izay nentiny avy tany Egypta izy: fa tsy mbola voaisy masirasira izany, satria noroahina tany Egypta izy ka tsy nahazo nijanona sady tsy nahafehy vatsy ho azy.
40 Ary ny andro nitoeran’ny Zanak’Isiraely tany Egypta dia telo-polo amby efa-jato taona.
41 Ary rehefa tapitra ny telo-polo amby efa-jato taona, dia tamin’izany andro izany indrindra no nivoahan’ny antokony rehetra izay an’i Jehovah tamin’ny tany Egypta.
42 Alina notandreman’i Jehovah izany, hitondrany azy hivoaka avy tamin’ny tany Egypta; eny, izany alina izany dia an’i Jehovah ka hotandreman’ny Zanak’Isiraely rehetra hatramin’ny taranany fara mandimby.
43 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy sy Arona: Izao no lalàn’ny Paska: Tsy hisy olona hafa firenena hihinana azy.
44 Ary ny andevolahin’ny olona rehetra izay novidim-bola dia hoforana aloha vao mba hihinana.
48 Ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba te-hitandrina ny Paskan’i Jehovah, dia aoka hoforana ny lehilahy rehetra eo aminy vao manatona hitandrina izany, ka ho tahaka ny tompon-tany ihany izy; fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany.
49 Lalàna iray no ho amin’ny tompon-tany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo.
50 Dia nataon’ny Zanak’Isiraely rehetra izany: araka izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy sy Arona no nataony.
51 Ary tamin’izany andro izany indrindra no nitondran’i Jehovah ny Zanak’Isiraely nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta araka ny antokony.
1 [Ny nanokanana ny lahimatoa ho an’i Jehovah] Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe:
2 Hamasino ho Ahy ny lahimatoa rehetra, dia izay voalohan-teraka rehetra eo amin’ny Zanak’Isiraely, na olona na biby fiompy: Ahy ireny.
3 Dia hoy Mosesy tamin’ny olona: Tsarovy izao andro izao, izay nivoahanareo avy tany Egypta, tamin’ny trano nahandevozana, fa tamin’ny tanana mahery no nitondran’i Jehovah anareo nivoaka avy tany; koa aza misy mihinana izay misy masirasira.
4 Izao andro amin’ny volana Abiba izao no ivoahanareo
5 Ary raha hitondra anao Jehovah ho any amin’ny tanin’ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Hivita ary ny Jebosita, izay nianianany tamin’ny razanao homena anao, dia tany tondra-dronono sy tantely, dia hanao izany fanompoana izany ianao amin’izao volana izao.
6 Hafitoana no hihinananao mofo tsy misy masirasira, ary amin’ny andro fahafito dia hisy andro firavoravoana ho an’i Jehovah.
7 Ny mofo tsy misy masirasira hohanina mandritra ny hafitoana; ary tsy hisy eo aminao izay mofo misy masirasira, ary tsy hisy izay masirasira akory ao aminao eny amin’ny taninao rehetra.
8 Dia hambaranao amin’ny zanakao amin’izany andro izany hoe: Noho ny nataon’i Jehovah tamiko tamin’ny nivoahako avy tany Egypta no anaovako izao.
9 Dia ho famantarana ho anao eo amin’ny tananao ary ho fampahatsiarovana eo ambonin’ny handrinao izany, mba ho ao am-bavanao ny lalàn’i Jehovah: fa tanana mahery no nitondran’i Jehovah anao nivoaka avy tany Egypta.
10 Dia tandremo amin’ny fotoany isan-taona izao lalàna izao.
11 Ary raha hitondra anao Jehovah ho any amin’ny tanin’ny Kananita araka izay nianianany taminao sy ny razanao, ka homeny anao izany,
12 dia hatokanao ho an’i Jehovah izay voalohan-teraka rehetra: ny voalohan-teraky ny biby fiompy rehetra izay anananao, dia ho an’i Jehovah ny lahy rehetra;
13 ary ny voalohan-teraky ny boriky dia hosoloanao zanak’ondry; fa raha tsy hanolo azy ianao, dia hofolahinao ny vozony; ary ny lahimatoa rehetra amin’ny olona eo amin’ny zanakao dia havotanao.
14 Ary raha hanontany anao ny zanakao amin’ny andro ho avy ka hanao hoe: Inona no anton’izao? dia holazainao aminy hoe: Tanana mahery no nitondran’i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta, tamin’ny trano nahandevozana;
15 ary raha nanamafy ny fony ka tsy nandefa antsika Farao, dia novonoin’i Jehovah ny lahimatoa rehetra tany amin’ny tany Egypta, hatramin’ny lahimatoan’ny olona ka hatramin’ny voalohan-teraky ny biby; koa izany no anaterako ho an’i Jehovah ny lahy voalohan-teraka rehetra, fa ny lahimatoa rehetra amin’ny zanako dia soloako.
16 Ary ho famantarana eo amin’ny tananao sy ho fehy eo ambonin’ny handrinao izany; fa tanana mahery no nitondran’i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta.
17 [Ny lalana nitondran’Andriamanitra ny Zanak’Isiraely, sy ny namakiany ny Ranomasina Mena] Ary rehefa nalefan’i Farao ny olona, dia tsy mba nentin’Andriamanitra tamin’ny lalana nankany amin’ny tanin’ny Filistina izy, na dia akaiky aza izany; fa hoy Andriamanitra: Andrao hanenina ny olona, raha mahita ady, ka hiverina any Egypta.
18 Fa nentin’Andriamanitra nivily ho amin’ny lalana mahazo any an-efitra amoron’ny Ranomasina Mena ny olona; ary voaomana hiady ny fiakatry ny Zanak’Isiraely avy tany amin’ny tany Egypta.
19 Ary nentin’i Mosesy niaraka taminy ny taolan’i Josefa, satria Josefa efa nampianiana dia nampianiana ny Zanak’Isiraely ka nanao hoe: Hamangy anareo tokoa Andriamanitra, dia hitondra ny taolako hiala atỳ miaraka aminareo ianareo.
20 Dia nifindra niala tao Sokota izy ka nitoby tao Etama teo an-tsisin’ny efitra.
21 Ary Jehovah nandeha teo alohany tamin’ny andri-rahona raha antoandro hitari-dalana azy, ary tamin’ny andri-afo nony alina ho fahazavana ho azy, handehanany andro aman’alina.
22 Ny andri-rahona tsy niala teo alohan’ny olona raha antoandro, na ny andri-afo nony alina.
5 Ary nisy nanambara tamin’ny mpanjakan’i Egypta fa efa nandositra ny olona, dia niova ny fon’i Farao sy ny mpanompony ny amin’ny olona, ka hoy izy: Inona izao nataontsika izao, no nandefa ny Isiraely hiala tamin’ny fanompoany antsika isika?
6 Dia nasainy nofehezina tamin’ny kalesy ny soavaly, sady nitondra ny vahoakany hanaraka azy izy.
7 Ary nitondra kalesy enin-jato voafantina sy ny kalesin’ny Egyptiana rehetra izy, izay samy nisy mpiady avy izy rehetra.
8 Ary Jehovah nanamafy ny fon’i Farao, mpanjakan’i Egypta, dia nanenjika ny Zanak’Isiraely izy, na dia tamin’ny tanana avo aza no nivoahany.
9 Koa nanenjika azy ny Egyptiana, dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin’i Farao sy ny soavaliny fitaingina ary ny miaramilany, ka nahatratra azy nitoby teo amoron’ny ranomasina, teo anilan’i Pi-hahirota, tandrifin’i Balazefona.
10 Ary rehefa mby akaiky Farao, dia natopin’ny Zanak’Isiraely ny masony, ka, indreo, ny Egyptiana tamy manenjika azy; dia raiki-tahotra indrindra ny Zanak’Isiraely ka nitaraina tamin’i Jehovah.
11 Ary hoy koa izy tamin’i Mosesy: Moa tsy nisy fasana va tany Egypta, no nentinao ho faty atỳ an-efitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta?
13 Ary hoy Mosesy tamin’ny olona: Aza matahotra ianareo, mijanòna, fa ho hitanareo ny famonjen’i Jehovah, izay hataony ho anareo anio; fa ny Egyptiana, izay hitanareo anio, dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay.
15 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Nahoana no mitaraina amiko ianao? lazao amin’ny Zanak’Isiraely mba handroso.
16 Ary aingao ny tehinao, dia ahinjiro ambonin’ny ranomasina ny tananao, ka saraho ny rano, dia handeha hamaky eo afovoan’ny ranomasina mandia ny tany maina ny Zanak’Isiraely.
17 Ary, indro, Izaho hanamafy ny fon’ny Egyptiana, ka hiditra hanenjika azy izy; dia hankalazaina Aho noho ny hataoko amin’i Farao sy amin’ny miaramilany rehetra mbamin’ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny,
18 dia ho fantatry ny Egyptiana fa Izaho no Jehovah, rehefa ankalazaina Aho noho ny ataoko amin’i Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny.
19 Ary Ilay Anjelin’Andriamanitra, Izay nandeha teo alohan’ny tobin’ny Isiraely, dia nifindra ka nankeo aoriany; ary ny andri-rahona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aoriany
20 ka tonga teo anelanelan’ny tobin’ny Egyptiana sy ny tobin’ny Isiraely: dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy nifanatona izy roa tonta mandritra ny alina.
21 Dia nahinjitr’i Mosesy teo ambonin’ny ranomasina ny tànany; ary rivotra mahery avy atsinanana no nampisavan’i Jehovah ny ranomasina mandritra iny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano.
22 Dia nandeha teo afovoan’ny ranomasina nandia ny tany maina ny Zanak’Isiraely; ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin’ny ankavanany sy teo amin’ny ankaviany.
23 Dia nanenjika azy ny Egyptiana ka niditra nanaraka azy teo afovoan’ny ranomasina, dia ny soavalin’i Farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingin-tsoavaliny.
24 Ary tamin’ny fiambenana maraina dia nijery ny tobin’ny Egyptiana tao amin’ny andri-afo sy ny rahona Jehovah ka nampifanaritaka ny tobin’ny Egyptiana.
25 Ary nanala ny kodian’ny kalesiny Izy ka nampahasarotra ny nandehanany, dia hoy ny Egyptiana: Aoka handositra ny tavan’ny Isiraely isika, fa Jehovah no miady amin’ny Egyptiana ho an’ireo.
26 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Ahinjiro eo ambonin’ny ranomasina ny tananao, mba hikatonan’ny rano amin’ny Egyptiana mbamin’ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoa valiny.
27 Dia nahinjitr’i Mosesy teo ambonin’ny ranomasina ny tànany, ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina, rehefa nadiva ho maraina ny andro; ary ny Egyptiana nandositra, kanjo nitsena ny rano ihany izy, dia narian’i Jehovah teo afovoan’ny ranomasina ny Egyptiana.
28 Ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingin-tsoavaly, dia ny miaramilan’i Farao rehetra izay niditra teo amin’ny ranomasina nanenjika ny Zanak’Isiraely; koa tsy nisy niangana na dia iray akory aza.
29 Fa ny Zanak’Isiraely kosa nandeha tamin’ny tany maina teo afovoan’ny ranomasina; ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin’ny ankavanany sy teo amin’ny ankaviany.
30 Izany no namonjen’i Jehovah ny Isiraely tamin’izany andro izany mba tsy ho azon’ny Egyptiana; ary hitan’ny Isiraely teny amoron’ny ranomasina ny fatin’ny Egyptiana.
31 Ary rehefa hitan’ny Isiraely ny asa lehibe izay nataon’ny tànan’i Jehovah tamin’ny Egyptiana, dia natahotra an’i Jehovah ny olona ka nino an’i Jehovah sy Mosesy mpanompony.
1 [Ny fihirana nataon’i Mosesy sy ny Zanak’Isiraely, rehefa tafita ny Ranomasina Mena izy] Ary Mosesy sy ny Zanak’Isiraely dia nihira izao fihirana izao ho an’i Jehovah ka nanao hoe: Hihira ho an’i Jehovah aho, fa avo indrindra Izy; ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariany ao amin’ny ranomasina.
4 Ny kalesin’i Farao sy ny miaramilany natsipiny ao amin’ny ranomasina; ary ny kapiteny voafantina nasitrika ao amin’ny Ranomasina Mena.
6 Ny tananao ankavanana, Jehovah ô, efa malaza amin’ny hery; ny tananao ankavanana, Jehovah ô, manorotoro ny fahavalo.
7 Amin’ny halehiben’ny voninahitrao no andringananao izay nitsangana hanohitra Anao; alefanao ny fahatezeranao mirehitra, izay mandevona azy toy ny mololo.
8 Ary ny fofonain’ny vavoronao no nanangonanao ny rano; nivongovongo toy ny antontan-javatra ny rano maria; nandry teo afovoan’ny ranomasina ny lalina.
10 Ny fofonainao no nitsofanao, dia nanarona azy ny ranomasina: nilentika tahaka ny firaka ao amin’ny rano mahery izy.
11 Jehovah ô, iza moa no tahaka Anao amin’izay andriamanitra? Iza moa no tahaka Anao, Izay ankalazaina amin’ny fahamasinana, deraina amin’ny fahatahorana, Mpanao fahagagana?
13 Tarihinao amin’ny famindram-ponao ny firenena izay navotanao, ka entinao amin’ny herinao ho any amin’ny fonenanao masina izy.
15 Toran-kovitra ny loham-pirenen’i Edoma; azon-korohoro ny lehilahy maherin’i Moaba; reraka ny fon’izay rehetra monina any Kanana.
16 Mahazo azy ny tahotra sy ny hovitra; Noho ny halehiben’ny sandrinao dia mangina tahaka ny vato izy. mandra-pandalon’ny olonao, Jehovah ô, mandra-pandalon’ny olona izay navotanao.
17 Dia hampiditra azy Hianao ka hamponina azy ao amin’ny tendrombohitra lovanao, ao amin’ny fitoerana nataonao hitoeranao, Jehovah ô, dia ao amin’ny fitoerana masina naorin’ny tananao, Tompo ô.
19 Fa niditra teo amin’ny ranomasina ny soavalin’i Farao sy ny kalesiny ary ny mpitaingin-tsoavaliny, ary Jehovah nampikatona ny ranomasina taminy; fa ny Zanak’Isiraely kosa nandeha tamin’ny tany maina teo afovoan’ny ranomasina.
20 Ary Miriama mpaminanivavy, anabavin’i Arona, dia nitondra ny ampongatapaka teny an-tànany; ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra ampongatapaka sady nandihy.
21 Ary Miriama namaly ireo lehilahy ireo ka nihira hoe: Mihira ho an’i Jehovah, fa avo indrindra Izy; ny soavaly sy ny mpitaingina azy nariany ao amin’ny ranomasina.
22 [Ny nandehanan’ny Zanak’Isiraely tany amin’ny efitra Sara, sy ny nitobiany tao Mara] Ary Mosesy nitondra ny Isiraely nifindra avy teo amoron’ny Ranomasina Mena, dia nandroso ho any amin’ny efitra Sora izy; ary nandeha hateloana tany an-efitra izy fa tsy nahita rano.
24 Dia nimonomonona tamin’i Mosesy ny olona ka nanao hoe: Inona no hosotroinay?
25 Ary dia nitaraina tamin’i Jehovah izy, ka dia nanehoan’i Jehovah hazo anankiray, ary rehefa natsipiny tao anatin’ny rano izany, dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan’i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao no nizaha ny toetra azy,
26 ka hoy Izy: Raha hazoto hihaino ny feon’i Jehovah Andriamanitrao ianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy hihaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy hataoko aminao ireny aretina rehetra ireny, izay nataoko tamin’ny Egyptiana; fa Izaho no Jehovah Izay mahasitrana anao.
27 [Ny nahatongavan’ny Zanak’Isiraely tao Elima, sy ny nimonomononany tany an-efitr’i Sinay noho ny tsi-fisian-kanina, ary ny nanomezan’Andriamanitra azy mana sy papelika hohaniny. Ary tonga tao Elima izy; ary tao nisy loharano roa ambin’ny folo sy hazo rofia fito-polo, dia nitoby teo anilan’ny rano izy.
1 Ary tamin’ny andro fahadimy ambin’ny folo tamin’ny volana faharoa taorian’ny nialany tany amin’ny tany Egypta dia nifindra niala tao Elima ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra, ka nankany amin’ny efitra Sina, izay eo anelanelan’i Elima sy Sinay.
2 Dia nimonomonona tamin’i Mosesy sy Arona tany an-efitra ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra,
3 ka nanao taminy hoe: Inay anie izahay mba matin’ny tànan’i Jehovah tany amin’ny tany Egypta, raha nipetraka teo anilan’ny fahandroan-kena ka nihinan-kanina ho voky; fa nitondra anay nivoaka ho atỳ an-efitra ianareo hahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao.
4 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Indro, Izaho handatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo; dia hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza hohaniny isan’andro, hizahako toetra azy, na handeha manaraka ny lalako izy, na tsia.
5 Ary raha mby amin’ny andro fahenina dia hamboariny izay azony; ary hisy indroa toraka izay angoniny isan’andro.
6 Ary hoy Mosesy sy Arona tamin’ny Zanak’Isiraely rehetra: Anio hariva dia ho fantatrareo fa Jehovah no nitondra anareo nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta;
7 ary rahampitso maraina dia ho hitanareo ny voninahitr’i Jehovah, fa efa reny ny fimonomononanareo tamin’i Jehovah; fa izahay moa no inona, no imonomononanareo?
8 Ary hoy koa Mosesy; Ho hitanareo izany, raha homen’i Jehovah hena hohanina ianareo anio hariva, ary mofo hahavoky rahampitso maraina; fa efa ren’i Jehovah ny fimonomononanareo, izay nimonomononanareo taminy; fa izahay moa no inona? Tsy izahay no imonomononanareo, fa Jehovah.
9 Ary hoy Mosesy tamin’i Arona: Lazao amin’ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra, hoe: Manatòna eo anatrehan’i Jehovah; fa efa reny ny fimonomononanareo.
10 Ary raha Arona mbola niteny tamin’ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra, dia nijery nanatrika ny efitra izy ireo, ka, indro, ny voninahitr’i Jehovah niseho teo amin’ny rahona.
11 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe:
12 Efa reko ny fimonomononan’ny Zanak’Isiraely, koa mitenena aminy hoe: Anio hariva dia hihinan-kena ianareo, ary rahampitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.
14 ary nony niala ny ando, dia, indro, nisy zava-madinika boribory teny amin’ny efitra, madinika toy ny fanala amin’ny tany.
15 Ary rehefa hitan’ny Zanak’Isiraely izany, dia nifanontany hoe izy: Inona itony? satria tsy fantany ireny. Dia hoy Mosesy taminy: Itony no mofo izay nomen’i Jehovah ho fihinanareo.
16 Izao no teny izay nandidian’i Jehovah: Samia manangona azy ianareo araka izay tokony ho laninareo avy, dia eran’ny vata omera avy ho amin’ny isan-olona, araka ny isanareo; samia mitondra ianareo rehetra ho an’izay ao an-dainy avy.
17 Dia nanao izany ny Zanak’Isiraely, ka samy nanangona: ny sasany nanangona be, ary ny sasany kosa kely.
18 Ary raha nafatrany tamin’ny vata omera izany, dia tsy nanana amby ny nanangona be, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy; samy nanangona araka izay fihinany avy izy.
20 Kanefa tsy mba nanaraka ny tenin’i Mosesy izy, fa namela sisa ho tra-maraina ihany ny olona sasany, dia niteraka olitra izany ka maimbo; ary dia tezitra tamin’ny olona Mosesy.
22 Ary nony tamin’ny andro fahenina dia nanangona avy sasaka noho ny isan’andro ny olona, dia indroan’ny vata omera ho an’ny isan-olona avy; dia avy ny lohan’ny fiangonana ka nanambara tamin’i Mosesy.
23 Ary hoy Mosesy taminy: Izao no lazain’i Jehovah: Rahampitso dia tena andro fitsaharana masina ho an’i Jehovah; koa manendasa izay hendasinareo, ary mahandroa izay handrahoinareo, ary izay sisa rehetra dia avelao ho anareo, hotehirizina ho tra-maraina.
24 Dia namela izany ho tra-maraina izy, araka izay nandidian’i Mosesy; ary tsy mba maimbo na niteraka olitra izany.
25 Ary hoy Mosesy: Hano ireny anio, fa Sabata ho an’i Jehovah anio, ka anio no tsy hahitanareo azy any an-tsaha.
26 Henemana no hanangonanareo azy; fa Sabata ny andro fahafito, ka dia tsy hisy amin’izany.
27 Ary nony tamin’ny andro fahafito dia nisy olona nivoaka hanangona, fa tsy nahita na dia kely akory aza.
28 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Mandra-pahoviana no handavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko?
29 Saino fa Jehovah no nanome anareo ny Sabata, koa izany no anomezany anareo mofo ampy ho indroa andro amin’ny andro fahenina; samia mitoetra eo amin’ny fitoerany avy ianareo, ka aoka tsy hisy hiala amin’ny fitoerany amin’ny andro fahafito.
30 Dia nitsahatra ny olona tamin’ny andro fahafito.
31 Ary ny anarany dia nataon’ny taranak’Isiraely hoe Mana; ary tahaka ny voan-drafy izy sady fotsy; ary ny fanandramana azy dia tahaka ny mofo misy tantely.
32 Ary hoy Mosesy: Izao no teny izay nandidian’i Jehovah: Analao eran’ny vata omera izy hotehirizina hatramin’ny taranakareo fara mandimby, mba ho hitany ny mofo izay nampihinaniko anareo tany an-efitra, raha nitondra anareo nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta Aho.
33 Ary hoy Mosesy tamin’i Arona: Makà vilany, ka asio mana eran’ny vata omera eo anatiny, dia apetraho eo anatrehan’i Jehovah mba hotehirizina hatramin’ny taranakareo fara mandimby.
34 Ary araka izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy no nametrahan’i Arona izany teo anatrehan’ny Vavolombelona mba hotehirizina.
35 Ary ny Zanak’Isiraely nihinana mana mandritra ny efa-polo taona mandra-pahatongany tany amin’izay tany misy monina: eny, mana no nohaniny mandra-pahatongany tany amin’ny sisin’ny tany Kanana.
36 Ary ny omera dia ampahalofon’ny vata efaha.
1 [Ny nimonomononan’ny Zanak’Isiraely noho ny tsi-fisian-drano, sy ny nanomezan’Andriamanitra azy rano avy tamin’ny vatolampy] Ary nifindra ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra, ka niala tao an-efitra Sina, araka izay natoron’i Jehovah hitobiany, dia nitoby tao Refidima; ary tsy nisy rano hosotroin’ny olona.
2 Dia nila ady tamin’i Mosesy ny olona ka nanao hoe: Omeo rano izahay mba hosotroinay. Fa hoy Mosesy taminy: Nahoana no mila ady amiko ianareo? Nahoana no maka fanahy an’i Jehovah ianareo?
3 Ary nangetaheta teo ny olona, dia nimonomonona tamin’i Mosesy izy ka nanao hoe: Nahoana ianao no nitondra anay niakatra niala tany Egypta hahafatin-ketaheta anay sy ny zanakay ary ny bibinay?
4 Ary Mosesy nitaraina tamin’i Jehovah ka nanao hoe: Ahoana no hataoko amin’ireto olona ireto? fa mila hitora-bato ahy izy.
5 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Mandrosoa eo alohan’ny olona, ary itondray hiaraka aminao ny loholon’ny Isiraely; ary ny tehinao, ilay nikapohanao an’i Neily, dia ento eny an-tananao, ka mandehana.
6 Ary, indro, hijanona eo anatrehanao eo ambonin’ny harambato any Horeba Aho, dia hikapoka ny harambato ianao, ka hisy rano hivoaka avy aminy hosotroin’ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo imason’ny loholon’ny Isiraely.
7 Ary ny anaran’izany tany izany dia natao­ny hoe Masa sy Meriba, noho ny ady nataon’ny Zanak’Isiraely, sy noho ny nakany fanahy an’i Jehovah hoe: Eto aminay va Jehovah, sa tsia?
8 Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin’ny Isiraely tao Refidima.
9 Dia hoy Mosesy tamin’i Josoa: Mifidiana lehilahy ho antsika, dia mandehana ka miadia amin’ny Amalekita; rahampitso dia hijoro eo an-tampon’ny havoana aho ka hitana ny tehin’Andriamanitra etỳ an-tanako.
10 Ary Josoa dia nanao araka izay efa nolazain’i Mosesy taminy, ka niady tamin’ny Amalekita izy; ary Mosesy sy Arona sy Hora kosa niakatra ho ao an-tampon’ny havoana.
11 Ary raha nasandratr’i Mosesy ny tànany, dia nahery ny Isiraely; fa raha nampidininy ny tànany, dia nahery kosa ny Amalekita.
12 Fa efa vizana ny tanan’i Mosesy; ka dia naka vato izy roa lahy, ka nataony teo ambanin’i Mosesy hipetrahany; ary Arona sy Hora dia nanohana ny tànany, ka ny iray tamin’ny anila, ary ny iray kosa tamin’ny anila; dia naharitra tsy nidina intsony ny tànany mandra-pahafatin’ny masoandro.
13 Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin’ny lelan-tsabatra.
14 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Soraty eo amin’ny boky izany ho fahatsiarovana, ka ambarao amin’i Josoa; fa hofoanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy ho eny ambanin’ny lanitra.
16 Fa hoy izy: Jehovah nianiana hoe: Ny adin’i Jehovah amin’ny Amalekita dia tsy hitsahatra hatramin’izay taranany fara mandimby.
1 [Ny namangian’i Jetro an’i Mosesy, sy ny hevitra natorony azy] Ary efa ren’i Jetro, mpisorona tao Midiana, rafozan’i Mosesy, izay rehetra nataon’Andriamanitra ho an’i Mosesy sy ny Isiraely olony, dia ny nitondran’i Jehovah ny Isiraely nivoaka avy tany Egypta.
2 Dia nentin’i Jetro, rafozan’i Mosesy, Zipora, vadin’i Mosesy, rehefa nampivereniny izy,
3 ary ny zanany mirahalahy: Gersoma no anaran’ny anankiray, fa hoy izy: Efa vahiny atỳ amin’ny tanin’ny firenena hafa aho;
4 ary Eliezera kosa no anaran’ny anankiray, fa hoy izy: Andriamanitry ny razako no namonjy ahy ka nahafaka ahy tsy ho voan’ny sabatr’i Farao.
5 Dia tonga Jetro, rafozan’i Mosesy, nitondra ny vady aman-janak’i Mosesy hankany aminy tany an-efitra, izay nitobiany teo anilan’ny tendrombohitr’Andriamanitra:
6 dia nampilaza tamin’i Mosesy izy ka nanao hoe: Izaho Jetro rafozanao avy hamangy anao, ary ny vadinao mbamin’ny zanany roa lahy koa.
8 Ary nambaran’i Mosesy tamin’ny rafozany izay rehetra efa nataon’i Jehovah tamin’i Farao sy tamin’ny Egyptiana noho ny amin’ny Isiraely, mbamin’ny fahoriana rehetra nanjo azy teny an-dalana, sy ny namonjen’i Jehovah azy.
9 Dia faly Jetro noho ny soa rehetra izay efa nataon’i Jehovah tamin’ny Isiraely, izay novonjeny ho afaka tamin’ny tanan’ny Egyptiana.
10 Ary hoy Jetro: Isaorana anie Jehovah, Izay namonjy anareo ho afaka tamin’ny tanan’ny Egyptiana sy tamin’ny tànan’i Farao, dia Izay namonjy ny olona tsy hotapahin’ny Egyptiana.
11 Ankehitriny dia fantatro fa lehibe Jehovah mihoatra noho ny andriamanitra rehetra, dia tamin’izay zavatra nentin’ny Egyptiana nirehareha tamin’ireny.
12 Ary Jetro, rafozan’i Mosesy, nitondra fanatitra dorana sy fanatitra hafa alatsa-drà ho an’Andriamanitra; dia nankao Arona sy ny loholon’ny Isiraely rehetra hiara-mihinan-kanina amin’ny rafozan’i Mosesy teo anatrehan’Andriamanitra.
13 Ary nony maraina dia nipetraka hitsara ny olona Mosesy; ka dia nijanona teo anatrehan’i Mosesy ny olona hatramin’ny maraina ka hatramin’ny hariva.
14 Ary rehefa hitan’ny rafozan’i Mosesy izay rehetra nataony tamin’ny olona, dia hoy izy: Inona izao zavatra ataonao amin’ny olona izao? Nahoana no ianao irery ihany no mipetraka, fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatrehanao hatramin’ny maraina ka hatramin’ny hariva?
15 Ary hoy Mosesy tamin’ny rafozany: Satria mankaty amiko ny olona hanontany amin’Andriamanitra.
16 Raha misy manana ady izy, dia mankaty amiko, ka mitsara azy roa tonta aho, dia mampahalala azy ny didin’Andriamanitra sy ny lalàny.
17 Ary hoy ny rafozan’i Mosesy taminy; Tsy tsara izao zavatra ataonao izao.
19 Ary ankehitriny, dia maneke ny teniko, fa hanoro hevitra anao aho, ka Andriamanitra anie homba anao: Aoka ianao ho alalan’ny olona amin’Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin’Andriamanitra;
21 Ary mizaha eo amin’ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an’Andriamanitra, dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly; ka manendre mpifehy arivo sy mpifehy zato sy mpifehy dimam-polo ary mpifehy folo hifehy azy.
23 Raha hanao araka izany zavatra izany ianao, ka hilaza izay didy aminao Andriamanitra, dia haharitra ianao, ary izao olona rehetra izao koa dia ho tonga soa aman-tsara any amin’ny taniny.
24 Dia neken’i Mosesy ny tenin’ny rafozany, ka nataony avokoa izay rehetra efa nolazainy.
25 Dia nofidin’i Mosesy izay lehilahy mahay tamin’ny Isiraely rehetra ka nataony lohan’ny olona hanapaka azy, dia ho mpifehy arivo sy ho mpifehy zato sy ho mpifehy dimam-polo ary ho mpifehy folo.
26 Dia nitsara ny olona mandrakariva ireo; koa ny ady sarotra ihany no nentiny tao amin’i Mosesy, fa ny ady madinika rehetra kosa dia notsarainy ihany.
27 Ary Mosesy namoaka ny rafozany; ka dia lasa nody any amin’ny taniny izy.
1 [Ny nitobian’ny Zanak’Isiraely teo an-efitr’i Sinay, sy ny fanekena nataon’Andriamanitra taminy] TAMIN’ny volana fahatelo taorian’ny nialan’ny Zanak’Isiraely tamin’ny tany Egypta, dia tamin’izany andro izany no nahatongavany tany an-efitr’i Sinay.
2 Ary rehefa nifindra niala teo Refidima izy ka tonga tany amin’ny efitr’i Sinay, dia nitoby teo amin’ny efitra; dia tandrifin’ny tendrombohitra no nitobian’ny Isiraely teo.
3 Ary Mosesy niakatra ho ao amin’Andriamanitra, dia niantso azy Jehovah tao an-tendrombohitra ka nanao hoe: Izao no holazainao amin’ny taranak’i Jakoba sy hambaranao amin’ny Zanak’Isiraely:
4 Hianareo efa nahita izay nataoko tamin’ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin’ny elatry ny voromahery ary ny nampankanesako anareo ho atỳ amiko.
6 Dia ho fanjaka-mpisorona sy ho firenena masina ho Ahy ianareo. Ireo teny ireo no holazainao amin’ny Zanak’Isiraely.
7 Dia nandeha Mosesy ka nampaka ny loholon’ny vahoaka, dia nalahany teo anatrehany ireo teny rehetra ireo, izay nandidian’i Jehovah azy.
8 Dia namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe: Izay teny rehetra nolazain’i Jehovah dia hataonay. Ary dia nentin’i Mosesy tao amin’i Jehovah kosa ny tenin’ny olona.
9 [Ny fiomanan’ny Zanak’Isiraely alohan’ny nanomezan’Andriamanitra azy ny Lalàna] Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Indro Aho mankeo aminao ao anatin’ny rahona maizina, mba ho ren’ny olona raha miteny aminao Aho, ka dia hino anao mandrakariva izy. Dia nambaran’i Mosesy tamin’i Jehovah ny tenin’ny olona.
10 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Ma­ndehana ho eny amin’ny olona, ka manamasina azy anio sy ampitso, ary ampanasao ny fitafiany izy:
11 ary aoka samy hiomana ho amin’ny andro fahatelo izy; fa amin’ny andro fahatelo no hidinan’i Jehovah ho eo imason’ny olona rehetra eo an-tampon’ny tendrombohitra Sinay.
12 Dia hanisy fefy manodidina ho an’ny olona ianao ka hanao hoe: Mitandrema ianareo mba tsy hiakatra ao amin’ny tendrombohitra, na hikasika ny sisiny akory aza; fa na iza na iza mikasika ny tendrombohitra dia hatao maty tokoa;
13 tsy hisy tanana hikasika azy, fa hotoraham-bato tokoa izy, na hotifirina tokoa, na biby na olona, tsy mba hovelomina izy; fa raha manao feo lavareny ny anjomara, dia vao hiakatra ho ao amin’ny tendrombohitra izy.
14 Dia nidina avy tao amin’ny tendrombohitra Mosesy ka nankeny amin’ny olona; dia nanamasina ny olona izy, ka samy nanasa ny fitafiany.
15 Ary hoy izy tamin’ny olona: Miomàna ianareo ho amin’ny andro fahatelo; aza manakaiky vehivavy akory.
16 Ary nony tamin’ny marain’ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy helatra ary rahona matevina teo amin’ny tendrombohitra, ary nisy feon’anjomara mafy indrindra, dia toran-kovitra ny olona rehetra izay teo an-toby.
17 Ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka avy teo an-toby mba hihaona amin’Andriamanitra; dia nijanona teo am-bodin’ny tendrombohitra izy.
20 Ary Jehovah nidina nankeo an-tendrombohitra Sinay, dia teo an-tampon’ny tendrombohitra; ary Jehovah niantso an’i Mosesy hankeo an-tampon’ny tendrombohitra; dia niakatra Mosesy.
21 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Midìna, ka pepero ny olona, fandrao hisisika hankao amin’i Jehovah izy mba hijery ka hahafatesana maro.
22 Ary aoka ny mpisorona koa, izay manakaiky an’i Jehovah, hanamasina ny tenany, fandrao himaona hamely azy Jehovah.
23 Ary hoy Mosesy tamin’i Jehovah: Tsy mahazo miakatra ho eto amin’ny tendrombohitra Sinay ny olona; fa Hianao nandidy anay ka nanao hoe: Fefeo ny tendrombohitra, ka hamasino izy.
24 Ary hoy Jehovah taminy: Mandehana midina, nefa miakara ianao, ka ento hiaraka aminao Arona; fa ny mpisorona sy ny olona dia aza avela hisisika hiakatra ho ao amin’i Jehovah, fandrao haringana izy.
25 Ary Mosesy dia nidina nankeny amin’ny olona ka niteny taminy.
1 [Ny nanomezan’Andriamanitra ny Didy Folo] Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe:
2 Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta, tamin’ny trano nahandevozana.
4 Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin’ny lanitra ambony, na izay etỳ amin’ny tany ambany, na izay any amin’ny rano ambanin’ny tany.
5 Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin’ny zanaka hatramin’ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin’izay mankahala Ahy;
6 nefa kosa mamindra fo amin’ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko.
7 Aza manonona foana ny anaran’i Jehovah Andriamanitrao; fa tsy hataon’i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany.
10 Fa Sabatan’i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito; koa aza manao raharaha akory ianao amin’izany, na ny zanakao-lahy, na ny zanakao-vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao.
11 Fa henemana no nanaovan’i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin’izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra Izy tamin’ny andro fahafito; izany no nitahian’i Jehovah ny andro Sabata sy nanamasinany azy.
12 Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao ho anao.
17 Aza mitsiriritra ny tranon’ny namanao; aza mitsiriritra ny vadin’ny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an’ny namanao akory aza.
18 Ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy ny feon’ny anjomara ary nahita ny helatra sy ny tendrombohitra nivoa-tsetroka, ary nony nahita izany ny olona, dia toran-kovitra izy ka nijanona teny lavitra eny.
19 Dia hoy izy tamin’i Mosesy: Aoka ihany ianao no hiteny aminay, dia hihaino izahay; fa aza Andriamanitra no miteny aminay, fandrao maty izahay.
20 Dia hoy Mosesy tamin’ny olona: Aza matahotra; fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo, ary mba ho eo anatrehan’ny tavanareo ny fahatahorana Azy, mba tsy hanotanareo.
21 Dia nijanona teny lavitra eny ny olona, fa Mosesy kosa nanakaiky ny aizim-pito, izay nitoeran’Andriamanitra.
22 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Izao no lazaonao amin’ny Zanak’Isiraely: Hianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo.
24 Alitara tany no hataonao ho Ahy, ka haterinao eo amboniny ny fanatitra doranao sy ny fanati-pihavananao, dia ny ondry aman’osinao sy ny ombinao; eo amin’ny fitoerana rehetra izay ampahatsiarovako ny anarako no hanatonako anao sy hitahiako anao.
26 Ary aza asiana ambaratonga hiakaranao ho eo amin’ny alitarako, mba tsy ho hita eo ny fitanjahanao.
1 [Lalàna nasain’Andriamanitra hotandreman’ny Zanak’Isiraely] Ary izao no lalàna izay hataonao eo anatrehany:
2 Raha mividy andevo Hebreo ianao, dia enin-taona no hanompoany, ary amin’ny taona fahafito dia hiala ho afaka fotsiny izy.
4 Raha manome vady azy ny tompony, ka miteraka zazalahy na zazavavy aminy izy, dia ho an’ny tompony ihany ny vadiny sy ny zanany, fa izy irery ihany no hiala.
6 dia ho entin’ny tompony ho eo anatrehan’Andriamanitra izy, ary dia ho entiny ho eo amin’ny varavarana, na ho eo amin’ny tolam-baravarana, ka hotevehin’ny tompony amin’ny haolo ny sofiny; dia hanompo azy mandrakizay izy.
7 Ary raha misy mivaro-janakavavy ho vaditsindranon’olona, dia tsy mba ho tahaka ny fialan’ny andevolahy ho afaka no fialany.
8 Fa raha tsy ankasitrahan’ny tompony, izay nikasa hanambady azy, ravehivavy, dia havelany havotana ihany izy; tsy hahazo mivarotra azy ho any amin’ny firenena hafa izy, satria efa namitaka azy.
9 Ary raha mamofo azy ho vadin’ny zananilahy izy, dia araka ny fitondra zanakavavy no hataony aminy.
14 Ary raha misy olona avy sahisahy amin’ny namany hamono azy amin’ny fahafetsena, dia halainao izy, na dia eo amin’ny alitarako aza, mba hovonoina ho faty.
18 Ary raha misy olona mifanditra, ka ny anankiray mamely ny namany amin’ny vato, na amin’ny totohondry, koa tsy maty izy, fa marary ambany tsihy,
19 raha afa-mitsangana indray ka mandehandeha mitehina eny ala-trano izy, dia ho afa-tsiny ilay namely azy; kanefa handoa ny hevitr’andro tsy nanaovany zavatra izy sady hitsabo azy mandra-pahasitrany.
20 Ary raha misy olona mikapoka ny andevolahiny na ny andevovaviny amin’ny tsorakazo ka mahafaty azy eo am-pikapohana, dia hovaliana tokoa izy.
22 Ary raha misy olona mifanditra ka mandratra vehivavy manan’anaka, ka teraka tsy tonga volana ny zanany, kanefa tsy misy maninona, dia hosazina tokoa ilay olona araka izay hanaovan’ny vadin-dravehivavy azy; ary handoa araka izay handidian’ny mpitsara izy.
23 Fa raha misy maninona kosa, dia hanome aina solon’ny aina ianao,
24 maso solon’ny maso, nify solon’ny nify, tanana solon’ny tanana, tongotra solon’ny tongotra,
25 may solon’ny may, ratra solon’ny ratra, mivatra solon’ny mivatra.
26 Ary raha misy olona mamely ny mason’ny andevolahiny na ny mason’ny andevova­viny ka mahasimba azy, dia halefany ho afaka izy noho ny masony.
27 Ary raha ny nifin’ny andevolahy na ny andevovavy no afany, dia halefany ho afaka koa izy noho ny nifiny.
28 Ary raha misy omby manoto lehilahy na vehivavy ka mahafaty azy, dia hotoraham-bato tokoa ny omby, ary tsy hohanina ny henany; ary ny tompon’ilay omby dia ho afa-tsiny.
29 Fa raha omby efa zatra nanoto hatramin’ny teo aloha iny, sady efa nambara tamin’ny tompony izany, nefa izy no tsy niaro azy, koa nahafaty lehilahy na vehivavy ny omby, dia hotoraham-bato ny omby, ary ny tompony koa hovonoina.
30 Raha sazina izy, dia handoa vidin’aina araka izay sazy atao aminy.
32 Raha manoto andevolahy na andevovavy izy, dia homena sekely volafotsy telo-polo ny tompon’andevo, ary ny omby hotoraham-bato.
34 dia hanonitra azy ny tompon-davaka, ka vola no haloany ho an’ny tompony; ary ny maty dia ho azy.
35 Ary raha misy ombin’olona mandratra ny ombin’ny namany ka mahafaty azy, dia hamidiny ny omby velona, ka hozarainy ny vola vidiny; ary ny maty koa hozarainy.
36 Kanefa raha fantatra fa omby zatra nanoto hatramin’ny teo aloha iny, koa tsy niaro azy ny tompony, dia hanonitra omby ho solon’ny omby tokoa izy; ary ny maty dia ho azy.
37 Raha misy olona mangalatra omby, na ondry, na osy, ka mamono azy, na mivarotra azy, dia hanonitra omby dimy ho solon’ny omby iray izy ary ondry na osy efatra ho solon’ny ondry na osy iray.
1 Raha azo manamitrano ny mpangalatra ka asiana ho faty, dia tsy hisy valin-drà amin’izany;
2 fa raha tratry ny masoandro miposaka kosa izy, dia hisy valin-drà ihany amin’izany; hanonitra tokoa izy; ary raha tsy manana na inona na inona, dia hamidy izy noho ny halatra nataony.
4 Raha misy olona mampitondraka amin’ny voly na tanim-boaloboka, fa alefany handeha ny bibiny, ka homana ny volin’olona izany biby izany, dia amin’ny tsara indrindra ao amin’ny sahany, ary amin’ny tsara indrindra ao amin’ny tanim-boalobony, no hanonerany.
6 Raha misy olona mampitahiry vola na fanaka ny namany, ka angalarin’ny sasany ao amin’ny tranon’ilay olona izany, raha hita ny mpangalatra, dia hanonitra roa heny izy.
7 Fa raha tsy hita kosa ny mpangalatra, dia ho entina eo anatrehan’Andriamanitra ny tompon’ny trano mba hizahana na naninjitra ny tànany ka naka ny fananan’ny namany izy, na tsia.
8 Ny amin’ny zavatra ifandirana rehetra, na omby, na boriky, na ondry, na osy, na fitafiana, na zavatra very, izay ataon’olona ho azy, dia ho entina eo anatrehan’Andriamanitra ny tenin’izy roa tonta, koa izay helohih’Andriamanitra dia hanonitra roa heny ho an’ny namany.
10 dia fianianana amin’i Jehovah no hitsarana azy roa tonta, hahafantarana na efa naninjitra ny tànany ka naka ny fananan’ny namany ilay anankiray, na tsia; ary heken’ny tompony izany, dia tsy hisy onitra.
11 Fa raha nangalarina tany aminy tokoa izany, dia hanonitra ho an’ny tompon-javatra izy.
13 Ary raha misy olona mindran-javatra amin’ny namany, ka simba na maty izany, nefa tsy mba teo aminy ny tompon-javatra, dia hanonitra tokoa izy.
14 Fa raha teo aminy ihany ny tompon-javatra, dia tsy hanonitra izy; ary raha zavatra ahofa kosa, dia vitan’ny hofany izany.
18 Izay rehetra mandry amin’ny biby dia hatao maty tokoa.
19 Izay mamono zavatra hatao fanatitra amin’ny andriamanitra hafa, afa-tsy amin’i Jehovah ihany, dia ho voaozona.
20 Ary aza manao izay sarotra amin’ny vahiny, na mampahory azy; fa ela mba vahiny tany amin’ny tany Egypta ihany ianareo.
22 Fa raha mampahory azy na amin’inona na amin’inona ianao, ka mitaraina amiko izy, dia hihaino ny fitarainany tokoa Aho,
23 ka hirehitra ny fahatezerako, ary hamono anareo amin’ny sabatra Aho; dia mba ho mpitondratena ny vadinareo, ary ho kamboty kosa ny zanakareo.
25 Raha maka ny lamban’ny namanao ho tsatòka ianao, dia hampodinao aminy izany, raha mbola tsy milentika ny masoandro.
26 Fa izany ihany no firakofany sady fitafiany amin’ny hodiny, ka inona no ho entiny mandry? ary raha mitaraina amiko izy, dia hohenoiko, fa mamindra fo Aho.
27 Aza miteny ratsy an’Andriamanitra ianao, na manozona ny mpanapaka ny firenenao.
28 Aza atao ela vao manatitra ny santatry ny vokatrao sy ny fisotronao; ny matoa amin’ny zanakao-lahy dia omeo Ahy.
29 Izao no hataonao amin’ny ombinao sy ny ondry aman’osinao; hafitoana no hitoerany ao amin’ny reniny; ary amin’ny andro fahavalo no hanateranao azy ho Ahy.
30 Ary ho olona masina ho Ahy ianareo, koa izay hena voaviraviram-biby any an-tsaha dia tsy hohaninareo; fa harianareo ho an’ny amboa izany.
1 Aza manangan-tsaho foana. Aza mifandray tanana amin’ny ratsy fanahy ho vavolombelona mampidi-doza.
2 Aza manaraka ny maro hanao ratsy; ary aza mamaly ny amin’ny adin’olona hivily hanaraka ny maro hamadika ny rariny.
3 Aza mandravaka ny tenin’ny malahelo eo amin’ny fandaharan-teniny ianao.
4 Raha hitanao mania ny ombin’ny fahavalonao, na ny borikiny, dia avereno any aminy mihitsy izany.
5 Raha hitanao ny borikin’izay mankahala anao mihonaka ao ambanin’ny entany, dia aza malaina hamonjy azy ianao, fa manampia ny namanao hamaha azy tokoa.
6 Aza mamily ny rariny izay ananan’ny malahelo ao aminao, raha manana ady izy.
8 Ary aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny mason’ny mahiratra sy mamadika ny tenin’ny marina.
9 Ary aza mampahory vahiny, fa ianareo mahalala ny fon’ny vahiny, satria efa mba vahiny tany amin’ny tany Egypta ihany ianareo.
10 Ary enin-taona no hamafazanao amin’ny taninao sy hanangonanao ny vokatra;
11 fa amin’ny taona fahafito kosa dia hatsahatrao tsy hovolena izy, mba hisy hohanin’ny malahelo amin’ny firenenao; ary izay sisan’ireo dia mba hohanin’ny biby any an-tsaha kosa. Toy izany koa no hataonao amin’ny tanim-boalobokao sy amin’ny tanin’olivanao.
12 Henemana no hanaovanao ny raharahanao; fa amin’ny andro fahafito dia hitsahatra ianao, mba hialan’ny ombinao sy ny borikinao sasatra, ary mba hakan’ny zanaky ny ankizivavinao sy ny vahiny aina.
13 Ary tandremo izay rehetra nolazaiko taminareo, ka aza manonona ny anaran’andriamani-kafa akory ianareo; aza avela ho re avy amin’ny vavanao izany.
15 Tandremo ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira; hafitoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira, araka izay nandidiako anao, amin’ny fotoan’andro amin’ny volana Abiba, fa tamin’izany no nivoahanao avy tany Egypta; ary aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako.
16 Ary tandremo koa ny andro firavoravoana amin’ny fijinjana ny voaloham-bokatry ny asanao, izay nafafinao tany an-tsaha, sy ny andro firavoravoana amin’ny fanangonana amin’ny faran’ny taona, raha manangona ny vokatry ny asanao avy any an-tsaha ianao.
17 Dia intelo isan-kerintaona no hisehoan’ny lehilahy rehetra aminareo eo anatrehan’i Jehovah Tompo.
18 Aza manatitra ny ran’ny zavatra vonoina hatao fanatitra ho Ahy ianao, raha mbola misy masirasira ao aminao; ary aza avela ho tra-maraina ny saboran’ny zavatra vonoina amin’ny andro firavoravoana ho Ahy.
19 Ny santatry ny voaloham-bokatry ny taninao dia ho entinao ao an-tranon’i Jehovah Andriamanitrao. Aza mahandro zanak’osy amin’ny rononon-dreniny.
26 Tsy hisy ho afa-jaza na ho momba ao amin’ny taninao; hotanterahiko ny isan’ny andronao.
29 Tsy handroaka azy eo alohanao amin’ny taona iray Aho, fandrao ho lao ny tany, ka hihamaro hamely anao ny bibi-dia.
31 Ary hatramin’ny Ranomasina Mena ka hatramin’ny ranomasin’ny Filistina no hataoko fari-taninao, ary hatramin’ny efitra ka hatramin’ny Ony; fa hanolotra ny mponina amin’ny tany ho eo an-tananareo Aho; ary handroaka azy eo alohanao ianao.
32 Aza manao fanekena aminy na amin’ny andriamaniny ianao.
33 Tsy honina eo amin’ny taninao ireny, fandrao hampanota anao amiko; fa raha manompo ny andriamaniny ianao, dia ho fandrika aminao tokoa izany,
1 [Ny namonoana fanatitra hanamafiana ny fanekena, sy ny nahitan’i Mosesy mbamin’ny loholon’ny Isiraely an’Andriamanitra] Ary hoy Izy tamin’i Mosesy: Miakara ao amin’i Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abiho ary fito-polo lahy amin’ny loholon’ny Isiraely; ka miankohofa eny lavitra eny ianareo;
2 nefa Mosesy ihany no hanakaiky an’i Jehovah, fa ireo tsy mba hanakaiky; ary ny olona tsy hiakatra homba azy.
3 Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin’ny olona ny teny rehetra izay nataon’i Jehovah sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe: Ny teny rehetra izay nolazain’i Jehovah dia hataonay.
4 Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon’i Jehovah, dia nifoha maraina koa ka nanorina alitara teo am-bodin’ny tendrombohitra sy tsangam-bato roa ambin’ny folo, araka ny firenen’Isiraely roa ambin’ny folo.
5 Ary ny zatovo amin’ny Zanak’Isiraely nirahiny, dia nitondra fanatitra dorana ireo ka namono vantotr’ombilahy hatao fanati-pihavanana ho an’i Jehovah.
6 Ary nalain’i Mosesy ny antsasaky ny rà ka nataony teo anaty lovia, ary ny antsasaky ny rà kosa natopiny teo amin’ny alitara.
7 Dia naka ny bokin’ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan’ny olona. Ary hoy ny olona: Izay rehetra nolazain’i Jehovah dia hataonay sy hekenay.
8 Ary nalain’i Mosesy ny rà ka natopiny tamin’ny olona, dia hoy izy: Indro ny ran’ny fanekena izay nataon’i Jehovah taminareo ny amin’izany teny rehetra izany.
9 Dia niakatra Mosesy sy Arona sy Nadaba sy Abiho ary fito-polo lahy tamin’ny loholon’ny Isiraely.
10 Dia nahita an’Andriamanitry ny Isiraely izy; koa ny teo ambanin’ny tongony dia toy ny fanganohanon’ny vato safira voavoatra, ary toy ny tenan’ny lanitra ny famirapirany.
11 Ary tsy naninjitra ny tànany tamin’ireo lehiben’ny Zanak’Isiraely Izy; dia nahita an’Andriamanitra izy ireo, ary nihinana sy nisotro.
12 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Miakara eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitoera eto, dia homeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy, izay nosoratako hampianarina azy.
13 Dia niainga Mosesy sy Josoa mpanompony; ary Mosesy dia niakatra tao an-tendrombohitr’Andriamanitra.
14 Ary hoy izy tamin’ny loholona: Miandrasa anay eto mandra-piverinay eto aminareo; ary, indro, Arona sy Hora dia eto aminareo, koa raha misy olona manana ady, aoka hankeo amin’izy roa lahy izy.
15 Dia niakatra tao amin’ny tendrombohitra Mosesy, ary ny rahona nanarona ny tendrombohitra.
16 Ary ny voninahitr’i Jehovah nitoetra teo ambonin’ny tendrombohitra Sinay, ary ny rahona nanarona azy henemana; dia niantso an’i Mosesy tamin’ny andro fahafito teo afovoan’ny rahona Izy.
17 Ary ny fijery ny voninahitr’i Jehovah teo an-tampon’ny tendrombohitra dia tahaka ny afo mandevona teo imason’ny Zanak ‘Isiraely.
18 Dia niditra tao afovoan’ny rahona Mosesy ka niakatra tao amin’ny tendrombohitra; ary nitoetra tao amin’ny tendrombohitra efa-polo andro sy efa-polo alina Mosesy.
1 [Ny nandidian’Andriamanitra an’i Mosesy ny amin’ny hanaovana ny Tabernakely sy ny fanaka momba azy] Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe:
2 Mitenena amin’ny Zanak’Isiraely mba hitondra fanatitra ho Ahy izy; dia avy amin’ny olona rehetra izay amporisihin’ny fony no handraisanareo ny fanatitra ho Ahy.
4 sy manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy volon’osy,’
5 sy hoditr’ondrilahy efa nomen’aina sy hodi-takasy sy hazo akasia,
6 sy diloilo hatao fanazavana sy zava-manitra ho amin’ny diloilo fanosorana sy ho ditin-kazo mani-pofona,
7 sy vato beryla sy vato halatsaka an-tranontranony amin’ny efoda sy amin’ny saron-tratra.
12 Ary mandrendreha vava volamena efatra hatao aminy, ka ataovy eo amin’ny tongony efatra; dia vava volamena roa eo amin’ny lafiny iray, ary vava volamena roa eo amin’ny lafiny iray koa.
14 Ary ampidiro ny bao ho eo amin’ny vava volamena, izay eo amin’ny lafin’ny fiara, hilanjana azy.
15 Eo amin’ny vava volan’ny fiara no hitoeran’ny bao, ka tsy hesorina eo izy.
16 Ary ataovy ao anatin’ny fiara ny Vavolombelona izay homeko anao.
17 Ary manaova rakotra fanaovam-panavotana amin’ny volamena tsara: roa hakiho sy sasany ny lavany, ary iray hakiho sy sasany ny sakany.
18 Ary manaova kerobima volamena roa; voasana no hanaovanao azy roa ho eo amin’ny sakany roa amin’ny rakotra fanaovam-panavotana
19 Ny kerobima iray ataovy indray mivofy amin’ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa amin’ny sakany anankiray: indray mivofy amin’ny rakotra fanaovam-panavotana no hanaovanareo ny kerobima roa, dia amin’ny sakany roa.
20 Ary aoka hivelatra eo ambony ny elatry ny kerobima, mba hanalofan’ny elany ny rakotra fanaovam-panavotana; ary ny tavany hifanatrika, sady hanatrika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy.
21 Ary apetraho eo ambonin’ny fiara ny rakotra fanaovam-panavotana; ary ao anatin’ny fiara no asio ny Vavolombelona izay homeko anao.
22 Ary ao no hihaona aminao Aho, ka ao ambonin’ny rakotra fanaovam-panavotana no hitenenako aminao, dia ao anelanelan’ny kerobima roa, izay eo ambonin’ny fiaran’ny Vavolombelona, ka holazaiko izay rehetra handidiako anao holazainao amin’ny Zanak’Isiraely.
26 Ary manaova vava volamena efatra hatao aminy, ka ataovy eo amin’ny zorony efatra izay eo amin’ny tongony efatra ireo:
27 eo akaikin’ny sisiny no hasiana ny vava volamena ho fitoeran’ny bao hilanjana ny latabatra.
28 Ary hazo akasia no anaovy ny bao, ka petaho takela-bolamena; ary amin’ireo no hilanjana ny latabatra.
30 Ary asio mofo aseho eo ambonin’ny latabatra ho eo anatrehako mandrakariva.
32 Ary hisy sampany enina amin’ny ankilany roa: dia sampany telo amin’ny fanaovan-jiro eo amin’ny ankilany iray, ary sampany telo amin’ny fanaovan-jiro eo amin’ny ankilany iray koa,
33 dia vodi-voniny telo atao tahaka ny vonin’ny amygdala, mbamin’ny kiboriny sy ny voniny, eo amin’ny sampany anankiray; ary vodi-voniny telo koa atao tahaka ny vonin’ny amygdala, mbamin’ny kiboriny sy ny voniny, eo amin’ny sampany anankiray koa; dia toy izany avokoa amin’ny sampany enina izay amin’ny fanaovan-jiro.
34 Ary eo amin’ny fanaovan-jiro dia hisy vodi-voniny efatra atao tahaka ny vonin’ny amygdala, mbamin’ny kiboriny sy ny voniny,
35 dia kiboriny iray eo ambanin’ny sampany roa sady miray aminy, ary kiboriny iray koa eo ambanin’ny sampany roa sady miray aminy, ary kiboriny iray koa eo ambanin’ny sampany roa sady miray aminy; dia amin’ny sampany enina izay miray amin’ny fanaovan-jiro.
36 Ny kiboriny sy ny sampany dia hiray avokoa; hatao indray mivofy aminy amin’ny volamena tsara izy rehetra.
39 Volame­na tsara talenta iray no hanaovana azy mbamin’ireny fanaka rehetra ireny.
1 Ary ny tabernakely dia hataonao ambainy folo amin’ny rongony fotsy madinika voahasina sy manga sy volomparasy ary mena; kerobima, asan’ny mpanenona mahay, no hataonao sorany.
2 Ny halavan’ny ambainy iray dia valo amby roa-polo hakiho; ary ny lambanan’ny ambainy iray dia efatra hakiho; hitovy ohatra ny ambainy rehetra.
4 Ary manaova tadivavarana manga ho eo an-tsisin’ny ambainy iray, dia eo an-tsisin’ny anankiray efa voavitrana; ary manaova toy izany koa amin’ny ambainy farany, dia eo an-tsisin’ny anankiray efa voavitrana koa.
5 Tadivavarana dimam-polo no hataonao eo amin’ny ambainy iray, ary tadivavarana dimam-polo koa no hataonao eo amin’ny sisin’ny ambainy izay amin’ny anankiray efa voavitrana koa; ary hifandray ny tadivavarana.
6 Ary manaova farango volamena dimam-polo, ka akambano amin’ny farango ny ambainy, ka dia ho voakambana ho iray ny tabernakely.
7 Ary manaova ambainy koa amin’ny volon’osy ho lay handrakofana ny tabernakely; dia iraika ambin’ny folo ambainy no hanaovanao azy.
8 Ny halavan’ny ambainy iray dia telo-polo hakiho, ary ny lambanan’ny ambainy iray dia efatra hakiho; hitovy ohatra ny ambainy iraika ambin’ny folo.
9 Ary avitrano ny ambainy dimy hikambana, ary ny ambainy enina kosa hikambana. Ary aforeto ny ambainy fahenina amin’ny sakan’ny lay anatrehana.
10 Ary manaova tadivavarana dimam-polo eo an-tsisin’ny ambainy iray izay farany amin’ny efa voavitrana; ary tadivavarana dimam-polo koa ho eo an-tsisin’ny ambainy iray amin’ny anankiray koa efa voavitrana.
11 Ary manaova farango; varahina dimam-polo, ka ampidiro ho eo amin’ny tadivavarana ary akambano ny lay, ka dia ho iray ihany izy.
12 Ary izay mihoatra amin’ny ambain’ny lay, dia ny antsasaky ny ambainy izay mihoatra, dia avelao hiraviravy eo ivohon’ny tabernakely.
13 Ary ny iray hakiho avy eo amin’ny lohany roa amin’ny lamba, izay mihoatra amin’ny halavan’ny ambain’ny lay, dia avelao hiraviravy eo amin’ny lafibeny roa amin’ny tabernakely handrakotra azy.
14 Ary manaova koa rakotry ny lay amin’ny hoditr’ondrilahy efa nomenaina, ary manaova sarony hodi-takasy ho eo amboniny.
15 Ary manaova zana-kazo akasia ho amin’ny tabernakely.
16 Folo hakiho ny hahavon’ny zana-kazo iray, ary iray hakiho sy sasany ny indraben’ny zana-kazo iray.
17 Lahiny roa no ho amin’ny zana-kazo iray, ka hasiana izay hikambanany; izany no hanaovanao ny zana-kazo rehetra amin’ny tabernakely.
18 Ary manaova ny zana-kazo ho amin’ny tabernakely, dia zana-kazo roa-polo ho eo amin’ny lafiny atsimo.
19 Ary manaova faladia volafotsy efa-polo, dia faladia roa avy ho ambanin’ny isan-janakazo iray hiorenan’ny lahiny roa.
20 Ary manaova zana-kazo roa-polo ho eo amin’ny lafiny faharoa amin’ny tabernakely, dia ny lafiny avaratra.
21 Ary manaova faladiany volafotsy efa-polo, dia faladia roa avy ho ambanin’ny isan-janakazo iray.
22 Ary ny lafiny andrefana amin’ny tabernakely, izay ao ivohony, dia hanaovanao zana-kazo enina.
23 Ary zana-kazo roa no hataonao ho eo amin’ny zoron’ny tabernakely amin’ny lafiny ivoho.
24 Ary hakambana ho iray izy hatramin’ny ambany ka hatramin’ny ambony, ka hasianao vava vola iray ihany: ho toy izany avokoa izy roa; eo amin’ny zorony roa no hisy izany.
25 Ary aoka hisy zana-kazo valo sy ny faladiany volafotsy, dia faladia enina ambin’ny folo: faladia roa avy ho ambanin’ny isan-janakazo iray.
26 Ary manaova barany hazo akasia: dia dimy ho amin’ny zana-kazo amin’ny lafiny iray amin’ny tabernakely,
27 sy barany dimy ho amin’ny zana-kazo amin’ny lafiny iray koa amin’ny tabernakely, ary barany dimy ho amin’ny zana-kazo amin’ny lafiny andrefana izay ao ivohony.
28 Ary ny barany afovoany, izay afovoan’ny zana-kazo, dia hahatratra ny farany roa.
29 Ary ny zana-kazo hopetahanao takela-bolamena, ary hataonao volamena koa ny vava vola aminy, izay hitoeran’ny barany; ary petaho takela-bolamena koa ny barany.
31 Ary manaova efitra lamba manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina; kerobima, asan’ny mpanenona mahay, no hataonao sorany.
32 Ary ahantòny amin’ny andry hazo akasia efatra izay voapateka takela-bolamena izy; ho volamena koa ny fihantonany; ary eo amin’ny faladia volafotsy efatra no hiorenany.
33 Ary ny efitra lamba dia ataovy eo ambanin’ny farango; ary ampidiro ao anatin’ny efitra lamba ny fiaran’ny Vavolombelona; ary ny efitra lamba no hampisaraka ny fitoerana masina sy ny fitoerana masina indrindra ho anareo.
34 Ary ny rakotra fanaovam-panavotana dia ataovy eo ambonin’ny fiaran’ny Vavolombelona eo amin’ny fitoerana masina indrindra.
35 Ary apetraho eo ivelan’ny efitra ny latabatra, ary ny fanaovan-jiro tandrifin’ny latabatra amin’ny lafiny atsimo amin’ny tabernakely; ary ny latabatra ataovy eo amin’ny lafiny avaratra.
36 Ary manaova varavarana lamba ho eo amin’ny lay, dia amin’ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina, asan’ny mahay tenona samy hafa soratra.
37 Ary manaova andry hazo akasia dimy ho amin’ny varavarana lamba, ka peta­ho takela-bolamena; ary ho volamena koa ny fihantonany; ary mandrendreha faladia varahina dimy hiorenany.
1 Ary manaova ny alitara amin’ny hazo akasia: dimy hakiho avy ny lafiny efatra, dia ho efa-joro tsy mivadi-mandry izy; ary telo hakiho ny hahavony.
2 Ary manaova ny tandrony eo amin’ny zorony efatra, ka ataovy miray aminy; ary petaho takela-barahina.
3 Ary manaova ny vilaniny fandraofan-davenona handraofana ny lavenony ary ny sotron’afony sy ny loviany famafazana ary ny fitrebiny sy ny fitondran’afony; varahina no hanaovanao ny fanaka rehetra momba azy.
4 Ary manaova makarakara varahina tahaka ny harato ho eo aminy; ary manaova vava-varahina efatra hatao ambonin’ny harato eo amin’ny zorony efatra,
5 Ary ataovy eo ambanin’ny sikin’ny alitara hatreo ambodiny izany; ary aoka ny makarakara hanasaka ny alitara.
6 Ary manaova bao ho amin’ny alitara, dia bao hazo akasia, ka petaho takela-barahina,
7 Ary ampidiro eo amin’ny vava varahina ny bao; ary aoka ho eo amin’ny lafiny roa amin’ny alitara ny bao, raha lanjaina izy,
9 Ary manaova ny kianjan’ny tabernakely: amin’ny lafiny atsimo hisy fefy lamba rongony fotsy madinika voahasina ho amin’ny kianja, zato hakiho ny halavany amin’ny lafiny iray;
10 ary ho roa-polo ny tsangantsangany, ary ho roa-polo ny faladiany varahina; ho volafotsy ny fihantonana amin’ny tsangantsangany sy ny anjaka hitohizany,
11 Ary ho tahaka izany amin’ny lafiny avaratra, amin’ny lavany dia hisy fefy lamba, zato hakiho ny halavany, ary ho roa-polo ny tsangantsangany, ary ho roa-polo ny faladiany varahina; ho volafotsy ny fihantonana amin’ny tsangantsangany sy ny anjaka hitohizany,
12 Ary hisy fefy lamba dimam-polo hakiho amin’ny sakan’ny kianja amin’ny lafiny andrefana; ho folo ny tsangantsangany, ary ho folo ny faladiany,
13 Ary ny sakan’ny kianja amin’ny lafiny atsinanana ho dimam-polo hakiho.
14 Ary hisy fefy lamba dimy ambin’ny folo hakiho amin’ny sakany iray; ho telo ny tsangantsangany, ary ho telo ny faladiany.
15 Ary hisy fefy lamba dimy ambin’ny folo hakiho amin’ny sakany iray koa; ho telo ny tsangantsangany ary ho telo ny faladiany.
16 Ary eo amin’ny vavahadin’ny kianja dia hisy vavahady sy lamba roa-polo hakiho, dia manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina, asan’ny mahay tenona samy hafa soratra; ho efatra ny tsangantsangany, ary ho efatra ny faladiany.
17 Ny tsangantsangany rehetra amin’ny kianja manodidina dia samy hisy anjaka volafotsy hitohizany; ho volafotsy ny fihantonany, ary ho varahina ny faladiany,
18 Ny lavan’ny kianja ho zato hakiho, ary ny sakany ho dimam-polo hakiho, ary ny hahavony ho dimy hakiho, ka hatao rongony fotsy madinika voahasina izany, ary ho varahina ny faladiany.
20 Ary mandidia ny Zanak’Isiraely hitondra aminao diloilon’oliva tsara voavely hatao fanazavana, mba hampirehetana jiro mandrakariva.
21 Ao anatin’ny trano lay fihaonana, dia eo ivelan’ny efitra lamba izay manakona ny Vavolombelona, no handaharan’i Arona sy ny zanany azy ho eo anatrehan’i Jehovah hatramin’ny hariva ka hatramin’ny maraina; ho lalàna mandrakizay amin’ny Zanak’Isiraely izany hatramin’ny taranany fara mandimby,
1 [Ny amin’ny hanendrena ny mpisorona, sy izay ho fomban’ny fitafiany] Ary asaovy manatona anao Arona rahalahinao mbamin’ny zanany, avy amin’ny Zanak’Isiraely, mba ho mpisorona ho Ahy izy, dia Arona mbamin’i Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara, zanak’i Arona.
2 Ary manaova fitafiana masina ho an’i Arona rahalahinao ho voninahitra sy ho fahatsaran-tarehy.
3 Ary mitenena amin’izay hendry fo, izay nofenoiko fanahim-pahendrena, mba hanao ny fitafian’i Arona hanamasinana azy ho mpisorona ho Ahy.
4 Ary izao no fitafiana izay hataony: saron-tratra sy efoda sy akanjo ivelany sy akanjo lava tenom-boaroy sy hamama ary fehin-kibo; dia hanao fitafiana masina ho an’i Arona rahalahinao izy, sy ho an’ny zanany, mba ho mpisorona ho Ahy izy.
6 Dia aoka izy hanao ny efoda amin’ny volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina, asan’ny mpanenona mahay.
7 Aoka hisy soroka roa avy amin’ny sisiny roa hampikambana azy.
9 Ary makà vato beryla roa, ka soraty eo aminy ny anaran’ny Zanak’Isiraely:
10 ny anarany enina amin’ny vato iray, ary ny anarany enina kosa amin’ny vato iray, araka ny fizokiany;
11 amin’ny asan’ny mpanora-bato, tahaka ny fanoratana fanombohan-kase, no hanoratanao ny vato roa, araka ny anaran’ny Zanak’Isiraely; ary asio randram-bolamena manodidina izy,
12 Ary ataovy eo amin’ny soroky ny efoda ny vato roa, ho vato fahatsiarovana ho an’ny Zanak’Isiraely; ary Arona hitondra ireo anarany ireo eo anatrehan’i Jehovah amin’ny sorony roa ho fahatsiarovana.
14 sy olam-bolamena tsara roa; mifanolana toy ny tady no hanaovanao ireo, ary hataonao eo amin’ny randram-bolamena ireo alom-bolamena toy ny tady ireo.
15 Ary manaova saron-tratra fitsarana, ka asan’ny mpanenona mahay, toy ny nanaovana ny efoda, no hanaovanao azy; volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina no hanaovanao azy.
21 Ary ny vato dia alaharo araka ny anaran’ny Zanak’Isiraely, dia roa ambin’ny folo araka ny anarany; ary hisy soratra toy ny amin’ny fanombohan-kase, ho amin’ny firenena roa ambin’ny folo araka ny anarany avy.
22 Ary eo amin’ny saron-tratra asio olam-bolamena tsara mifanolana toy ny tady.
23 Ary manaova vava volamena roa ho eo amin’ny saron-tratra; ary ny vava vola roa dia ataovy eo amin’ny zorony roa ambony amin’ny saron-tratra.
24 Ary ny tady volamena roa dia ataovy eo amin’ny vava vola roa, izay amin’ny zorony roa ambony amin’ny saron-tratra.
25 Ary ny lanin’ny tady roa dia ataovy eo amin’ny soroky ny efoda anoloana.
26 Ary manaova vava volamena roa, ka ataovy amin’ny zorony roa ambany amin’ny saron-tratra, dia amin’ny sisiny anatiny, izay manolotra ny efoda.
27 Ary manaova vava volamena roa koa, ka ataovy eo amin’ny soroko roa amin’ny efoda, dia ao ambaniny, eo anoloany, akaikin’ny fikambanany, eo ambonin’ny fehin-kibo momba ny efoda.
28 Ary kofehy manga no hamehezana ny vava volan’ny saron-tratra amin’ny vava volan’ny efoda, mba ho eo ambonin’ny fehin-kibo momba ny efoda ny saron-tratra, ka tsy ho afaka eo.
29 Ary Arona hitondra ny anaran’ny Zanak’Isiraely eo amin’ny saron-tratra fitsarana manolotra ny fony, raha miditra amin’ny fitoerana masina izy, mba ho fahatsiarovana mandrakariva eo anatrehan’i Jehovah.
30 Ary ataovy eo amin’ny saron-tratra fitsarana ny Orima sy Tomima; ary hanolotra ny fon’i Arona izany, raha miditra eo anatrehan’i Jehovah izy; ka dia ho entin’i Arona manolotra ny fony mandrakariva eo anatrehan’i Jehovah ny fitsarana ny Zanak’Isiraely.
32 Ary asio vozony eo afovoany, ary aoka hisy sisiny voatenona manodidina ny vozony, tahaka ny vozon’ny akanjo fiarovan-tratra, mba tsy hahatriatra azy.
33 Ary asio sarin’ampongaben-danitra manga sy volomparasy sy mena manodidina eny amin’ny moron-tongony, ary famohamandry volamena kosa eo anelanelany manodidina:
34 dia famohamandry sy sarin’ampongaben-danitra mifanelanelana manodidina eny amin’ny moron-tongotry ny akanjo ivelany.
35 Ary hiakanjoan’i Arona izany, raha manao ny fanompoam-pivavahany izy, mba ho re ny fanenony, raha miditra amin’ny fitoerana masina eo anatrehan’i Jehovah sy raha mivoaka izy, mba tsy hahafaty azy.
36 Ary manaova takela-bolamena tsara, ka asio soratra eo aminy, araka ny fanoratana fanombohan-kase, hoe: HAMASININA HO AN’I JEHOVAH.
37 Ary asio kofehy manga izy, ka ataovy eo amin’ny hamama: dia eo anoloan’ny hamama no hasiana azy.
38 Ary ho eo ambonin’ny handrin’i Arona izy, mba ho entin’i Arona ny heloky ny zava-masina, izay hohamasinin’ny Zanak’Isiraely amin’ny fanomezany masina rehetra; ary ho eo amin’ny handriny mandrakariva izany, mba hankasitrahana eo anatrehan’i Jehovah ny olona.
39 Ary ny akanjo lava dia ataovy hariry madinika tenom-boaroy; ary manaova hamama rongony fotsy madinika sy fehin-kibo, asan’ny mahay tenona samy hafa soratra.
40 Ary manaova akanjo lava ho an’ny zanak’i Arona, ary manaova fehin-kibo ho azy; ary manaova satroka boribory ho azy ho voninahitra sy ho fahatsaran-tarehy.
41 Ary ataovy amin’i Arona rahalahinao sy ny zanany koa ireo; dia manosora azy sy manokana azy ary manamasina azy, mba ho mpisorona ho Ahy izy.
42 Ary manaova kalisaona fohy rongony fotsy ho azy hanarona ny fitanjahany; hatramin’ny valahany ka hatramin’ny feny no hisy azy.
43 Ary hiakanjoan’i Arona sy ny zanany ireo, raha miditra amin’ny trano-lay fihaonana izy, na manakaiky ny alitara hanao fanompoam-pivavahana ao amin’ny fitoerana masina, mba tsy hahazoany heloka hahafaty azy; ho lalàna mandrakizay aminy sy amin’ny taranany mandimby azy izany.
1 [Ny amin’ny fanokanana ny mpisorona] Ary izao no zavatra hataonao aminy hanamasinana azy ho mpisorona ho Ahy: makà vantotr’ombilahy iray sy ondrilahy roa tsy misy kilema,
3 Ary ataovy eo anaty harona iray izy, ka ento amin’ny harona; ary ny vantotr’ombilahy sy ny ondrilahy roa dia ento koa.
4 Ary Arona Sy ny zanany dia ento hankeo amin’ny varavaran’ny trano-lay fihaonana, ka ampandroy amin’ny rano izy
5 Ary alao ny fitafiana ka ampiakanjoy an’i Arona ny akanjo lava sy ny akanjo ivelany misy ny efoda ary ny efoda sy ny saron-tratra ary fehezo amin’ny fehin-kibo mamba ny efoda izy;
6 ary ny hamama dia ataovy eo amin’ny lohany, ary ny diadema masina dia ataovy eo amin’ny hamama.
7 Ary alao ny diloilo fanosorana, ka aidino amin’ny lohany, dia manosora azy.
9 Ary fehezo amin’ny fehin-kibo izy, dia Arona sy ny zanany, ary fehezo aminy ny satroka boribory; ary ho azy ny fisoronana ho lalàna mandrakizay. Dia toy izany no hanokananao an’i Arona sy ny zanany.
10 Ary asaovy entina ho eo anoloan’ny trano-lay fihaonana ny vantotr’ombilahy; ary aoka Arona sy ny zanany hametraka ny tànany amin’ny lohan’ny vantotr’ombilahy;
11 dia vonoy eo anatrehan’i Jehovah ny vantotr’ombilahy, eo anoloan’ny varavaran’ny trano-lay fihaonana;
12 ary analao ny ran’ny vantotr’ombilahy, dia atenteno eo amin’ny tandroky ny alitara amin’ny fanandranao, ary ny rà sisa rehetra dia aidino eo am-bodin’ny alitara;
13 ary alao ny safo-drorohany re­hetra sy ny ila-atiny lehibe ary ny voany roa mbamin’ny fonom-boany, ka dory ho fofona eo ambonin’ny alitara;
14 fa ny henan’ny vantotr’ombilahy sy ny hodiny ary ny tain-drorohany dia dory amin’ny afo eny ivelan’ny toby; fanatitra noho ny ota izany.
15 Ary alao ny ondrilahy iray; ary aoka Arona sy ny zanany hametraka ny tànany amin’ny lohan’ny ondrilahy;
16 dia vonoy ny ondrilahy, ka tantazo ny ràny, dia atopazy manodidina amin’ny lafin’ny alitara;
17 ary rasao tsara ny ondrilahy, dia sasao ny taovany sy ny tongony, ka ataovy eo ambonin’ny voarasa sy ny lohany;
18 ary dory ho fofona eo ambonin’ny alitara ny tenan’ny ondrilahy; ho fanatitra dorana ho an’i Jehovah izany, dia hanitra ankasitrahana, fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah.
19 Ary alao ny ondrilahy iray koa; ary aoka Arona sy ny zanany hametraka ny tànany amin’ny lohan’ny ondrilahy;
20 dia vonoy ny ondrilahy ka analao ny ràny, dia atenteno amin’ny tendron’ny ravin-tsofina ankavanan’i Arona sy amin’ny tendron’ny ravin-tsofina ankavanan’ny zanany, ary amin’ny ankihiben-tànany ankavanana sy amin’ny ankihiben-tongony ankavanana; ary ny rà sisa dia atopazy manodidina amin’ny lafin’ny alitara
21 Ary analao ny rà, izay eo ambonin’ny alitara, sy ny diloilo fanosorana, ka afafazo amin’i Arona sy amin’ny fitafiany, ary amin’ny zanany sy amin’ny fitafian’ny zanany koa; dia ho masina izy sy ny fitafiany ary ny zanany sy ny fitafian’ny zanany koa.
22 Ary alao ny saboran’ny ondrilahy sy ny hofany sy ny safo-drorohany sy ny ila-atiny lehibe sy ny voany roa mbamin’ny fonom-boany ary ny soroka ankavanana; fa ondrilahy fanakanana izy;
23 ary manala iray amin’ny mofo sy iray amin’ny mofo voaisy diloilo ary iray amin’ny mofo manify izay eo amin’ny harona misy ny mofo tsy misy masirasira, izay eo anatrehan’i Jehovah;
24 ary ataovy eo an-tànan’i Arona sy eo an-tànan’ny zanany izy rehetra, ka ahevahevao izy hofanatitra ahevaheva eo anatrehan’i Jehovah.
25 Dia raiso amin’ny tànany izany, ka dory ho fofona eo ambonin’ny alitara, miaraka amin’ny fanatitra dorana ho hanitra ankasitrahana eo anatrehan’i Jehovah, dia fanatitra atao amin’ny afo, ho an’i Jehovah.
26 Ary alao ny tratran’ny ondrilahy fanokanana an’i Arona, ka ahevahevao ho fanatitra ahevaheva eo anatrehan’i Jehovah; dia ho anjaranao izany.
27 Ary hamasino ny tratran’ny fanatitra ahevaheva sy ny soroky ny fanatitra asandratra, izay ahevaheva sy izay asandratra avy amin’ny ondrilahy fanokanana, dia izay ho an’i Arona sy izay ho an’ny zanany.
28 Ary ho anjara mandrakizay ho an’i Arona sy ho an’ny taranany avy amin’ny Zanak’Isiraely izany, fa fanatitra asandratra izany; ary hisy fanatitra asandratra haterin’ny Zanak’Isiraely avy amin’ny fanati-pihavanany rehetra ho fanatitra asandratra ho an’i Jehovah.
29 Ary ny fitafiana masina izay an’i Arona dia ho an’ny zanany mandimby azy koa hanosorana azy sy hanokanana azy.
30 Hiakanjo azy hafitoana izay anankiray amin’ny zanany ho mpisarona handimby azy, dia izay miditra amin’ny trano-lay fihaonana hanao fanompoam-pivavahana ao amin’ny fitoerana masina.
31 Ary alao ny ondrilahy fanokanana ka andrahoy eo amin’izay fitoerana masina ny henany
32 Ary hohanin’i Arona sy ny zanany eo anoloan’ny varavaran’ny trano-lay fihaonana ny henan’ny ondrilahy sy ny mofo izay eo anatin’ny harona.
34 Ary raha misy sisa tsy lany amin’ny henan’ny fanatitra fanokanana, na amin’ny mofo, ka tra-maraina, dia hodoranao amin’ny afo ny sisa tsy lany: tsy hohanina izany, satria masina.
35 Dia manaova izany amin’i Arona sy ny zanany, araka izay rehetra nandidiako anao; hafitoana no hanokananao azy.
36 Ary vantotr’ombilahy iray no haterinao isan’andro ho fanatitra noho ny ota, hanaovana fanavotana; ary diovy ny alitara, raha manao fanavotana azy ianao; ary hosory izy hanamasina azy.
37 Hafitoana no hanaovanao fanavotana ho an’ny alitara sy hanamasinanao azy; dia ho masina indrindra ny alitara, ary ho masina izay rehetra manendry azy.
38 [Ny fanatitra isa-maraina sy isan-kariva] Ary izao no haterinao eo ambonin’ny alitara: zanak’ondry roa izay iray taona isan’andro isan’andro
39 (ny zanak’ondry iray haterinao nony maraina, ary ny zanak’ondry iray koa haterinao nony hariva),
40 ary koba tsara toto ampahafolon’ny efaha voaharoharo diloilo voavely ampahefatry ny hina sy divay ampahefatry ny hina, ho fanatitra aidina amin’ny isan-janak’ondry iray.
41 Ary ny zanak’ondry iray koa haterinao nony hariva; ary fanatitra hohanina sy fanatitra aidina tahaka ny natao tamin’ny fanatitra maraina no hampombainao azy, ho hanitra ankasitrahana, dia fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah.
42 Ho fanatitra dorana mandrakariva izany hatramin’ny taranakareo fara mandimby, eo anoloan’ny varavaran’ny trano-lay fihaonana eo anatrehan’i Jehovah, dia ao amin’izay hihaonako aminareo hiteny aminao
43 Ary hihaona amin’ny Zanak’Isiraely ao Aho, ka hohamasinin’ny voninahitro izy.
45 Ary honina eo amin’ny Zanak’Isiraely Aho ka ho Andriamaniny.
46 Ary ho fantany fa Izaho no Jehovah Andriamaniny, Izay nitondra azy nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta, mba honina eo aminy Aho; Izaho no Jehovah Andriamaniny.
4 Ary asio vava volamena roa izy eo ambanin’ny koronosiny, ka ataovy eo amin’ny zorony efatra ireo; ary ho fitoeran’ny bao ireo hilanjana azy.
6 Ary apetraho eo anoloan’ny efitra izay manakona ny fiaran’ny Vavolombelona izy, dia manandrify ny rakotra fanaovam-panavotana eo ambonin’ny Vavolombelona, izay hihaonako aminao.
8 ary raha mampirehitra ny lela fanaovan-jiro Arona nony hariva no handoroany izany koa; ditin-kazo mani-pofona eo anatrehan’i Jehovah mandrakariva hatramin’ny taranakareo fara mandimby izany.
10 Ary aoka Arona hanao fanavotana eo amin’ny tandrony indray mandeha isan-kerintaona; amin’ny ran’ny fanatitra noho ny ota, izay atao fanavotana, indray mandeha isan-kerintaona, no hanaovany fanavotana eo, hatramin’ny taranakareo fara mandimby; ho masina indrindra ho an’i Jehovah izany.
11 [Ny handoavana ny vola avotra] Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe;
12 Raha maka ny isan’ny Zanak’Isiraely araka ny fandaminana azy ianao, dia samy handoa avotry ny ainy avy ho an’i Jehovah ny isan-olona, raha alamina izy, mba tsy hisy areti-mandringana hanjo azy, raha alamina izy.
13 Izao no haloan’izay re­hetra voalamina, dia antsasaky ny sekely avy araka ny sekely masina (gera roa-polo ny sekely iray), eny, antsasaky ny sekely ho fanatitra ho an’i Jehovah.
14 Izay rehetra voalamina hatramin’ny roa-polo taona no ho miakatra no handoa ny fanatitra ho an’i Jehovah.
15 Ny manan-karena tsy handoa mihoatra noho ny antsasaky ny sekely, ary ny malahelo tsy handoa latsaka, raha mandoa ny fanatitra ho an’i Jehovah izy, hanavotra ny ainareo.
16 Ary handray ny vola avotra amin’ny Zanak’Isiraely ianao, ka hataonao amin’ny fanompoana ao amin’ny trano-lay fihaonana; ary ho fahatsiarovana ho an’ny Zanak’Isiraely eo anatrehan’i Jehovah izany, ho avotry ny ainareo.
17 [Ny tavy, sy ny diloilo fanosorana, ary ny ditin-kazo manitra] Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe:
18 Manaova tavy varahina hanasana, ary aoka ho varahina koa ny faladiany; ary apetraho eo anelanelan’ny trano-lay fihaonana sy ny alitara izy, ka asio rano eo anatiny.
19 Ary eo no hanasan’i Arona sy ny zanany ny tongony aman-tanany.
20 Raha miditra amin’ny trano-lay fihaonana izy, dia hisasa amin’ny rano, mba tsy hahafaty azy. Ary raha manakaiky ny alitara hanao fanompoam-pivavahana izy, mba handoro ny fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah,
21 dia hanasa ny tongony aman-tànany izy, mba tsy hahafaty azy; ary ho lalàna mandrakizay aminy sy ny zanany izany hatramin’ny taranany fara mandimby.
22 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe:
23 Makà zava-manitra tsara ho anao, dia miora mitete dimam-jato sekely sy havozomanitra antsasak’izany, dia dimam-polo amby roan-jato, sy veromanitra dimam-polo amby roan-jato
24 sy kasia dimam-jato; araka ny sekely masina, ary diloilon’oliva eran’ny hina;
25 dia amboary ho diloilo fanosorana masina izany, ho zavatra aharoharo, asan’ny mpangaroharo zava-manitra; ho diloilo fanosorana masina izany.
26 Ary hosory amin’izany ny trano-lay fihaonana sy ny fiaran’ny Vavolombelona,
27 sy ny latabatra mbamin’ny fanaka rehetra momba azy sy ny fanaovan-jiro mbamin’ny fanaka momba azy sy ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra,
28 ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mbamin’ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany.
31 Ary mitenena amin’ny Zanak’Isiraely hoe: Ity ho diloilo fanosorana masina ho Ahy hatramin’ny taranakareo fara mandimby.
32 Aoka tsy hihosoran’ny olon-kafa izany, na hisy haka tahaka azy, araka ny fanaovana azy; fa masina izy ka ho masina aminareo.
33 Na zovy na zovy mangaroharo izay tahaka azy, ary na zovy na zovy manosotra azy amin’ny vahiny dia hofongorana tsy ho amin’ny fireneny.
34 Dia hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Makà zava-manitra ho anao, dia natafa sy sekeleta sy helbena ary lebona madio; samy hamboarina manokana ireo.
35 Ary ataovy ditin-kazo manitra izy, dia zavatra aharoharo araka ny fanaon’ny mpangaroharo zava-manitra, dia asio sira izy, ary aoka ho madio sy masina.
36 Ary torotoroy ny sasany ho madinika indrindra, dia ataovy eo anoloan’ny Vavolombelona ao amin’ny trano-lay fihaonana, izay hihaonako aminao; ho masina indrindra ho anareo izany.
37 Ary ny amin’ny ditin-kazo manitra izay hataonao, dia aza mba misy atao tahaka azy ny ho anareo; ho masina aminao ho an’i Jehovah izany.
38 Na zovy na zovy manao izay tahaka azy ho fanorohana dia hofongorana tsy ho amin’ny fireneny.
1 [Ny nanendrena an’i Bezalila sy Oholiaba ho lohan’ny mpiasa] Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe:
2 Indro, efa notononiko anarana Bezalila, zanak’i Ory, zanak’i Hora, avy amin’ny firenen’i Joda;
3 ary efa nofenoiko fanahin’Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin’ny tao-zavatra samy hafa:
6 Ary, indro, Izaho efa nanome an’i Oholiaba, zanak’i Ahisamaka, avy amin’ny firenen’i Dana, ho namany; ary ny fon’izay hendry rehetra dia efa nasiako fahendrena, mba hanaovany izay rehetra efa nandidiako anao:
8 sy ny latabatra mbamin’ny fanaka momba azy, sy ny fanaovan-jiro tsara mbamin’ny fanaka rehetra momba azy, sy ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra
9 sy ny alitara fandoroana ny fanatitra odorana mbamin’ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy, sy ny faladiany.
10 ary ny fitafiana makarakara sy ny fitafiana masina ho an’i Arona mpisorona sy ny fitafian’ny zanany ho entiny misorona,
11 ary ny diloilo fanosorana sy ny ditin-kazo manitra ho ao amin’ny fitoerana masina: araka izay rehetra nandidiako anao no aoka hataon’ireo.
12 [Ny amin’ny fitandremana ny Sabata] Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe:
13 Ary dia milaza amin’ny Zanak’Isiraely ianao hoe: Ny Sabatako no tandremo; fa famantarana ho amiko, sy ho aminareo hatramin’ny taranakareo fara mandimby izany, mba ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Izay manamasina anareo.
14 Koa tandremo ny Sabata, fa masina aminareo izany; izay tsy manamasina azy dia hatao maty tokoa, fa izay rehetra manao raharaha amin’izany dia hofongorana tsy ho amin’ny fireneny.
15 Henemana no hanaovana raharaha; fa ny andro fahafito dia tena fitsaharana ka masina ho an’i Jehovah: izay rehetra manao raharaha amin’ny andro Sabata dia hatao maty tokoa.
16 Dia hotandreman’ny Zanak’Isiraely ny Sabata hankatoavany azy hatramin’ny taranany fara mandimby, dia fanekena mandrakizay izany.
17 Ho famantarana amiko sy amin’ny Zanak’Isiraely mandrakizay izany; fa tamin’ny henemana no nanaovan’i Jehovah ny lanitra sy ny tany, ary tamin’ny andro fahafito dia nitsahatra Izy ka niala sasatra.
18 [Ny nanomezan’Andriamanitra ny vato fisaka izay nisy ny Lalàna] Ary rehefa vita ny teny nataony tamin’i Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa, izay nisy ny Vavolombelona, dia vato fisaka voasoratry ny rantsan-tànan’Andriamanitra.
1 [Ny nanaovan’ny Zanak’Isiraely ombilahy kely volamena hiankohofany, sy ny fahatezeran’Andriamanitra noho izany] Ary rehefa hitan’ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy, dia niangona ho eo amin’i Arona izy ka nanao taminy hoe: Mitsangana, ka anaovy andriamanitra izahay, hitarika antsika eo aloha; fa ilay Mosesy iny, izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin’ny tany Egypta, dia tsy fantatray izay nanjo azy,
2 Ary hoy Arona taminy: Romboty ary ny kavim-bolamena, izay eny amin’ny sofin’ny vadinareo sy ny zanakareo-lahy ary ny zanakareo-vavy, ka ento etỳ amiko.
3 Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teny amin’ny sofiny ka nitondra azy ho eo amin’i Arona.
4 Ary izy nandray azy tamin’ny tanan’ny olona, dia namboatra azy tamin’ny fandraka ka nanao azy ho ombilahy kely anidina; dia niteny ny olona ka nanao hoe: Io no andriamanitrao, ry Isiraely, izay nitondra anao niakatra avy tany amin’ny tany Egypta.
5 Ary raha hitan’i Arona izany, dia nanao alitara teo anoloany izy; ary dia niantso Arona ka nanao hoe: Andro firavoravoana ho an’i Jehovah rahampitso.
7 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Ma­ndehana midina ianao; fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin’ny tany Egypta.
8 Nalaky nivily niala tamin’ny lalàna izay nasaiko nalehany izy ka efa nanao ombilahy kely anidina ho azy; ary efa niankohoka teo anatrehany sy namono zavatra hatao fanatitra taminy izy ka nanao hoe: Io no andriamanitrao, ry Isiraely, izay nitondra anao niakatra avy tany amin’ny tany Egypta.
9 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Efa hitako io firenena io, fa, indro, firenena mafy hatoka izy.
11 Fa Mosesy nifona tamin’i Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe: Jehovah ô, na­hoana ny fahatezeranao no mirehitra amin’ny olonao, izay nentinao nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta tamin’ny hery lehibe sy ny tanana mahery?
12 Nahoana ny Egyptiana no avela hilaza hoe: Mba hahita loza no nitondrany ireny nivoaka, hamonoany azy eny an-tendrombohitra sy handringanany azy tsy ho ambonin’ny tany? Mialà amin’ny fahatezeranao mirehitra, ka manenena ny amin’ny loza izay hanjo ny olonao.
13 Tsaro­vy Abrahama sy Isaka ary Isiraely mpanomponao, izay nianiananao tamin’ny tenanao sy nilazanao hoe: Hahamaro ny taranakareo Aho ho tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra; ary izany tany rehetra nolazaiko izany dia homeko ny taranakareo, ary izy handova izany mandrakizay.
14 Ary Jehovah dia nanenina ny amin’ny loza izay nokasainy hamelezana ny olony.
15 Ary Mosesy nihodina ka nidina avy tao an-tendrombohitra, nitondra ny vato fisaka roa nisy ny Vavolombelona teny an-tànany; ny vato fisaka nosoratana teo amin’ny lafiny roa: dia teo anatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra.
16 Ary ny vato fisaka dia asan’Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr’Andriamanitra, voasoratra teo amin’ny vato fisaka.
17 Ary rehefa ren’i Josoa ny fitabataban’ny olona izay nihorakoraka, dia hoy izy tamin’i Mosesy: Misy tabataban’ady atsy an-toby.
18 Fa hoy kosa izy: Tsy feo fihobian’ny mahery na feo fitomanian’ny resy no reko, fa feon’ny mihira.
19 Ary raha nanakaiky ny toby izy, dia nahita ny ombilahy kely sy ny dihy; ary nirehitra ny fahatezeran’i Mosesy, dia natontany ny vato fisaka teny an-tànany ka novakivakiny teo am-bodin’ny tendrombohitra.
20 Dia nalainy ilay ombilahy kely izay efa nataon’ny olona ka nodorany tamin’ny afo, ary notorotoroiny ho vovoka, dia nafafiny tambonin’ny rano ka nampisotroiny ny Zanak’Isiraely.
21 Ary hoy Mosesy tamin’i Arona: Inona no nataon’ity firenena ity taminao, no nitondranao heloka lehibe taminy?
23 ary hoy izy tamiko: Manaova andriamanitra ho antsika, hitarika antsika eo aloha; fa ilay Mosesy iny, izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin’ny tany Egypta, dia tsy fantatray izay nanjo azy.
25 Ary rehefa hitan’i Mosesy fa natondraka hanaram-po amin’izay tsy mety ny olona, satria efa natondrak’i Arona ho fanakorana eo amin’ny fahavalony izy,
26 dia nijanona teo amin’ny vavahadin’ny toby Mosesy ka nanao hoe: Izay rehetra an’i Jehovah mankanesa etỳ amiko. Ary ny taranak’i Levy rehetra niangona teo aminy.
27 Dia hoy izy taminy: Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Samia manao ny sabany eo am-balahany avy ianareo, dia mandrosoa sy miverimberena amin’isam-bavahadin’ny toby, ary samia mamono ny rahalahiny avy sy ny sakaizany avy ary ny namany avy ianareo.
28 Dia nanao araka ny tenin’i Mosesy ny taranak’i Levy; ary nahafatesana tokony ho telo arivo lahy ny olona tamin’izany andro izany.
29 Fa Mosesy efa nilaza hoe: Manokàna ny tenanareo ho an’i Jehovah ianareo anio; eny, samia mamono ny zanany sy ny rahalahiny avy, mba hahazoanareo fitahiana anio.
30 [Ny nifonan’i Mosesy, sy ny navalin’Andriamanitra azy] Ary nony maraina dia hoy Mosesy tamin’ny olona: Efa nanao fahotana lehibe ianareo; ary ankehitriny, dia hiakatra ho amin’i Jehovah aho, fa angamba hahazo manao fanavotana ny amin’ny fahotanareo.
31 Ary Mosesy dia niverina ho ao amin’i Jehovah ka nanao hoe: Indrisy! efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamani-bolamena ho azy.
32 Ary ankehitriny, enga anie ka hamela ny fahotany Hianao! fa raha tsy izany, mifona aminao aho, vonoy eo amin’ny bokinao izay nosoratanao ny anarako.
33 Fa hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Na iza na iza nanota tamiko, dia hovonoiko ny anarany eo amin’ny bokiko.
34 Mandehana ankehitriny, ka ento ny olona ho any amin’izay efa nolazaiko taminao; indro, ny Anjeliko no hitarika anao eo aloha; ary amin’izay andro hamaliako dia hamaly azy noho ny fahotany Aho.
35 Ary Jehovah namely ny olona, satria nanao ny ombilahy kely izy, dia ilay nataon’i Arona.
1 [Ny nitenenan’Andriamanitra ny Zanak’Isiraely, sy ny nanetren’ireo tena] Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy hoe: Mandehana miakatra hiala atỳ ianao sy ny firenena izay nentinao niakatra avy tany amin’ny tany Egypta, ho amin’ny tany izay nianianako tamin’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe: Ny taranakao no homeko azy.
3 dia ho amin’izay tany tondra-dronono sy tantely; nefa tsy hiara-miakatra aminao Aho (satria olona mafy hatoka ianao), fandrao handringana anao eny an-dalana Aho.
4 Ary rehefa ren’ny olona izany teny mampahory izany, dia nanjoretra izy, ka tsy nisy olona niravaka intsony.
5 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Lazao amin’ny Zanak’Isiraely hoe: Hianareo dia olona mafy hatoka; koa raha hiara-miakatra aminao Aho, na dia indray mipi-maso aza, dia handringana anao Aho; koa ankehitriny, esory ny firavakao hiala aminao, mba ho fantatro izay hataoko aminao.
6 Ary ny Zanak’Isiraely dia nanala ny firavany hatreo an-tendrombohitra Horeba.
7 [Ny nihaonan’i Mosesy tamin’Andriamanitra, sy ny naneken’Andriamanitra ny fangatahany] Ary fanaon’i Mosesy ny maka ny lay ka manorina azy eo ivelan’ny toby lavidavitra, ary ny anarany dia nataony hoe Ny trano-lay fihaonana. Ary izay rehetra nitady an’i Jehovah dia nivoaka ho eny amin’ny trano-lay fihaonana izay teo ivelan’ny toby.
8 Ary raha nivoaka ho eo amin’ny lay Mosesy, dia nitsangana ny olona rehetra, ka samy nijanona teo anoloan’ny varavaran’ny lainy avy, dia nitazana an’i Mosesy mandra-pahatongany ao amin’ny lay.
9 Ary raha niditra tao amin’ny lay Mosesy, dia nidina ny andri-rahona ka nijanona teo anoloan’ny varavaran’ny lay, ary Jehovah dia niresaka tamin’i Mosesy.
10 Ary hitan’ny olona rehetra ny andri-rahona nijanona teo anoloan’ny varavaran’ny lay; dia nitsangana ny olona rehetra, ka samy niankohoka teo anoloan’ny varavaran’ny lainy avy.
11 Ary Jehovah niteny nifanatrika tamin’i Mosesy, tahaka ny olona miresaka amin’ny sakaizany. Ary niverina nankeo amin’ny toby izy; fa ny mpanompony, dia Josoa zatovo, zanak’i Nona, tsy niala tamin’ny lay.
12 Ary hoy Mosesy tamin’i Jehovah: Indro fa Hianao milaza amiko hoe: Ento miakatra ity firenena ity, ary Hianao tsy mbola nampahafantatra ahy izay hirahinao hiaraka amiko; kanefa Hianao efa nilaza hoe: Mahalala anao tokoa Aho, ary efa nahita fitia eo imasoko koa ianao.
16 Fa inona anefa no hahafantarana fa nahita fitia eo imasonao izaho sy ny olonao? moa tsy amin’ny handehananao miaraka aminay va? dia ho voavaka amin’ny firenena rehetra ambonin’ny tany izahay, dia izaho sy ny olonao.
17 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Izao zavatra nolazainao izao dia hataoko koa; fa nahita fitia eo imasoko ianao, ary mahalala anao tokoa Aho.
19 Fa hoy kosa Jehovah: Izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran’i Jehovah eo anatrehanao; fa hiantra izay hiantrako Aho, ary hamindra fo amin’izay hamindrako fo.
21 Dia hoy Jehovah: Indro, misy fitoerana eto anilako; dia hijanona eo ambonin’ny harambato ianao;
1 [Ny nanavaozan’Andriamanitra ny fanekena] Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka ilay teo, dia hosoratako amin’ireo vato fisaka ireo ny teny izay tamin’ilay vato fisaka teo, izay novakivakinao;
2 ary aoka hivonona ianao mandra-pahamaraina; dia miakara raha maraina ho ao amin’ny tendrombohitra Sinay, ka mitsangana eo anatrehako ao an-tampon’ny tendrombohitra.
3 Ary aoka tsy hisy olona hiakatra afa-tsy ianao, ary aoka tsy hisy olona ho hita eny amin’ny tendrombohitra Sinay rehetra; ary ny ondry aman’osy koa sy ny omby dia aoka tsy hisy handrasana eny akaikin’izany tendrombohitra izany
4 Dia nanamboatra vato fisaka roa tahaka ilay teo Mosesy, ary nifoha maraina koa izy ka niakatra tao amin’ny tendrombohitra Sinay, araka izay nandidian’i Jehovah azy; ary nentiny teny an-tànany ny vato fisaka roa.
5 Ary Jehovah nidina tao anatin’ny rahona ka nijanona teo aminy, dia nanonona ny anaran’i Jehovah.
7 mitahiry famindram-po ho an’ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloky ny ray amin’ny zanaka sy ny zafy hatramin’ny zafiafy sy ny zafindohalika.
8 Ary Mosesy dia niondrika faingana tamin’ny tany ka niankohoka;
10 Ary hoy Izy: Indro, manao fanekena Aho, ka eo anatrehan’ny olonao rehetra no hanaovako zava-mahagaga, izay tsy mbola nisy natao tany amin’ny tany rehetra sy tany amin’ny firenena rehetra; ary ny olona rehetra izay itoeranao dia hahita ny asan’i Jehovah, fa mahatahotra izay zavatra efa hataoko amin’ny fiombako anao.
12 Koa mitandrema, fandrao hanao fanekena amin’ny mponina eo amin’ny tany izay halehanao ianao, ka ho fandrika eo afovoanao izany.
14 Fa tsy hiankohoka eo anatrehan’izay andriamani-kafa ianao; fa Jehovah, dia saro-piaro no anarany, satria Andriamanitra saro-piaro Izy,
15 fandrao ianao hanao fanekena amin’ny mponina eo amin’ny tany, ka hijangajanga hanaraka ny andriamaniny sy hamono zavatra hatao fanatitra ho an’ny andriamaniny izy, ary hasainy ianao ka hihinana amin’ny fanatiny;
16 ary andrao koa haka amin’ny zananivavy ho vadin’ny zanakao-lahy ianao, ary hijangajanga hanaraka ny andriamaniny ny zananivavy ka hampandeha ny zanakao-lahy hijangajanga hanaraka ny andriamaniny.
18 Tandremo ny andro firavoravoana, dia ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira, araka izay nandidiako anao, amin’ny fotoan’andro amin’ny volana Abiba, fa tamin’ny volana Abiba no nivoahanao avy tany Egypta.
19 Izay voalohan-teraka rehetra no Ahy, dia ny lahy amin’ny voalohan-teraky ny bibinao, na omby na ondry aman’osy;
20 fa ny voalohan-teraky ny boriky kosa dia hosoloanao zanak’ondry; ary raha tsy hanolo azy ianao, dia hofolahinao ny vozony; ary ny lahimatoa rehetra amin’ny zanakao dia havotanao. Ary aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako.
21 Henemana no hiasanao, fa amin’ny andro fahafito dia hitsahatra ianao: na dia amin’ny taom-pamafazana sy amin’ny taom-pijinjana aza dia hitsahatra ihany ianao.
22 Ary tandremo ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro amin’ny fanaterana ny voaloham-bokatra, raha mijinja ny vary tritika, sy ny andro firavoravoana amin’ny fanangonana amin’ny fitsingerenan’ny taona.
23 Intelo isan-kerintaona ny lehilahy rehetra aminao no hiseho eo anatrehan’i Jehovah Tompo, Andriamanitry ny Isiraely.
24 Fa handroaka firenena eo alohanao Aho ka hanitatra ny fari-taninao; ary tsy hisy olona haniry ny taninao, raha miakatra hiseho eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrao intelo isan-kerintaona ianao.
25 Aza manatitra ny ran’ny zavatra vonoina hatao fanatitra ho Ahy ianao, raha mbola misy masirasira ao aminao; ary aza avela ho tra-maraina ny zavatra vonoina hatao fanatitra ho Ahy amin’ny andro firavoravoana amin’ny Paska.
26 Ny santatra amin’ny voaloham-bokatry ny taninao dia haterinao ho ao an-tranon’i Jehovah Andriamanitrao. Aza mahandro zanak’osy amin’ny rononon-dreniny.
27 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Soraty ireo teny ireo, fa araka ireo teny ireo no nanaovako fanekena aminao sy amin’ny Isiraely.
28 Dia teo amin’i Jehovah efa-polo andro sy efa-polo alina izy sady, tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary nosoratan’i Jehovah tamin’ny vato fisaka ny tenin’ny fanekena, dia ny Didy Folo.
29 Ary Mosesy nidina avy tao an-tendrombohitra Sinay, ary teny an-tànany ny vato roa izay nisy ny Vavolombelona tamin’izy nidina avy teo an-tendrombohitra, ary tsy fantany ho namirapiratra ny hoditry ny tavany noho ny nitenenany taminy.
30 Ary nony hitan’i Arona sy ny Zanak’Isiraely rehetra Mosesy, ka, indro, namirapiratra ny hoditry ny tavany, dia natahotra azy izy.
31 Ary Mosesy niantso azy, dia niverina Arona sy ny lohan’ny fiangonana rehetra ho eo aminy; ary Mosesy niteny taminy.
32 Ary rehefa afaka izany, dia nanakaiky koa ny Zanak’Isiraely rehetra; ary Mosesy nandidy azy araka izay rehetra nolazain’i Jehovah taminy tao amin’ny tendrombohitra Sinay.
33 Ary rehefa vita ny teny nataon’i Mosesy taminy, dia nasiany fisalobonana ny tavany.
34 Ary raha niditra teo anatrehan’i Jehovah Mosesy hiteny aminy, dia nanaisotra ny fisalobonana izy mandra-pivoakany. Dia nivoaka izy ka nilaza tamin’ny Zanak’Isiraely izay efa nandidiana azy.
35 Ary hitan’ny Zanak’Isiraely ny tavan’i Mosesy, fa, indro, namirapiratra ny hoditry ny tavany; dia nasaron’i Mosesy ny tavany indray ny fisalobonana mandra-pidiny hiteny aminy indray.
1 [Ny nilazan’i Mosesy ny didin’i Jehovah ny amin’ny hitandremana ny Sabata sy ny hanaovana ny tabernakely, ary ny zavatra naterin’ny olona hanaovana azy] Ary Mosesy dia namory ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra, ka nanao taminy hoe: Izao no teny nandidian’i Jehovah hatao:
2 Henemana no hanaovanao raharaha, fa ny andro fahafito ho masina aminareo, dia tena andro fitsaharana ho an’i Jehovah; izay rehetra manao raharaha amin’izany dia hatao maty.
3 Aza mampirehitra afo amin’ny andro Sabata any amin’izay rehetra itoeranareo.
4 Ary Mosesy niteny tamin’ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra, ka nanao hoe: Izao no teny izay nandidian’i Jehovah:
5 Manalà ao aminareo fanatitra ho an’i Jehovah: izay rehetra amporisihin’ny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an’i Jehovah: dia volamena sy volafotsy sy varahina,
6 ary manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika, ary volon’osy
7 sy hoditr’ondrilahy efa nomenaina sy hodi-takasy ary hazo akasia,
8 sy diloilo hatao fanazavana sy zava-manitra ho amin’ny diloilo fanosorana sy ho ditin-kazo mani-pofona,
9 ary vato beryla sy vato halatsaka an-tranontranony ho amin’ny efoda sy ho amin’ny saron-tratra.
10 Ary aoka ny hendry rehetra eo aminareo ho avy ka hanao izay rehetra nandidian’i Jehovah:
13 ary ny latabatra sy ny baony mbamin’ny fanaka rehetra momba azy, ary ny mofo aseho,
14 ary ny fanaovan-jiro ho fanazavana mbamin’ny fanaka momba azy ary ny lela fanaovan-jirony sy ny diloilo hatao fanazavana,
15 ary ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra sy ny baony, ary ny diloilo fanosorana sy ny ditin-kazo mani-pofona, ary ny varavarana lamba ho eo amin’ny varavaran’ny tabernakely,
17 ary ny fefy lamba ho amin’ny kianja sy ny tsangantsangany sy ny faladiany sy ny vavahady lamba ho eo amin’ny vavahadin’ny kianja,
19 ary ny fitafiana makarakara ho entiny manao fanompoam-pivavahana ao amin’ny fitoerana masina sy ny fitafiana masina ho an’i Arona mpisorona ary ny fitafian’ny zanany ho entiny misorona.
20 Dia niala teo anatrehan’i Mosesy ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra.
21 Ary samy nanatona izy, dia izay rehetra nampahazotoin’ny fony, ary izay rehetra namporisihin’ny fanahiny, ka nitondra ny fanatitra ho an’i Jehovah hanaovana ny trano-lay fihaonana sy ny fanompoana rehetra momba azy ary ny fitafiana masina.
22 Dia nanatona ny lehilahy mbamin’ny vehivavy rehetra izay namporisihin’ny fony, ka nitondra fisisika sy kavina sy peratra sy voa volamena, dia izay firavaka volamena samy hafa rehetra, dia ny olona rehetra izay efa nanatitra volamena ho fanatitra ho an’i Jehovah.
23 Ary ny olona rehetra izay nanana manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy volon’osy sy hoditr’ondrilahy efa nomenaina ary hodi-takasy dia nitondra azy.
24 Izay rehetra nanatitra fanatitra volafotsy sy varahina dia nitondra ny fanatitra ho an’i Jehovah; ary izay rehetra nanana hazo akasia hanaovana zavatra ho amin’ny fanompoana dia nitondra azy.
25 Ary ny vehivavy rehetra izay hendry dia namoly tamin’ny tànany ka nitondra izay nofolesiny, dia ny manga sy volomparasy sy mena ary ny rongony fotsy madinika.
26 Ary ny vehivavy rehetra izay nampahazotoin’ny fony tamin’ny fahendrena dia namoly ny volon’osy.
27 Ary ny loholona nitondra ny vato beryla sy ny vato halatsaka an-tranontranony ho amin’ny efoda sy ho amin’ny saron-tratra,
28 ary ny zava-manitra sy ny diloilo hatao fanazavana sy ho amin’ny diloilo fanosorana ary ho amin’ny ditin-kazo mani-pofona.
29 Ary ny Zanak’Isiraely nitondra fanatitra sitra-po ho an’i Jehovah: dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay namporisihin’ny fony hitondra izay hanaovana ny zavatra rehetra nandidian’i Jehovah an’i Mosesy hatao.
30 Ary hoy Mosesy tamin’ny Zanak’Isiraely: Indro, efa notononin’i Jehovah anarana Bezalila, zanak’i Ory, zanak’i Hora, avy amin’ny firenen’i Joda,
31 ka efa nofenoiny fanahin’Andriamanitra, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin’ny tao-zavatra samy hafa,
34 Ary ny fahaizana hampianatra koa dia efa nataon’Andriamanitra tao am-pony, dia izy sy Oholiaba, zanak’i Ahisamaka avy amin’ny firenen’i Dana.
35 Ary efa nofenoiny fahendrena izy roa lahy, hanaovany ny tao-zavatra samy hafa, dia ny an’ny mpiasa tefy sy rafitra ary ny an’ny mpanenona mahay tenona samy hafa soratra, dia amin’ny manga sy volomparasy sy mena ary amin’ny rongony fotsy madinika ary ny an’ny mpanenona, dia ny ho mpanao ny asa samy hafa sy ho mpamorona asa kanto.
1 Dia hiasa Bezalila sy Oholiaba ary ny olona hendry rehetra, izay nomen’i Jehovah fahendrena sy fahiratan-tsaina, hahaizany hanao ny asa rehetra ho amin’ny fanompoana ao amin’ny fitoerana masina, araka izay rehetra nandidian’i Jehovah.
2 Ary Mosesy dia nampaka an’i Bezalila sy Oholiaba ary ny olona hendry rehetra, izay nasian’i Jehovah fahendrena tao am-pony, dia izay rehetra nampahazotoin’ny fony hankeo amin’ny asa hanao azy.
3 Ary izy ireo dia nandray tamin’i Mosesy ny fanatitra re­hetra izay efa nentin’ny Zanak’Isiraely hanaovana ny asa amin’ny fanompoana ao amin’ny fitoerana masina. Ary ny olona mbola nitondra fanatitra sitra-po isa-maraina ihany ho eo amin’i Mosesy.
4 Dia nanatona ny olon-kendry rehetra, izay nanao ny asa rehetra amin’ny fitoerana masina, samy niala tamin’ny asany izay nataony avy,
5 ka niteny tamin’i Mosesy hoe: Ny olona mitondra mihoatra lavitra noho izay hahavita ny fanompoana amin’ny asa nandidian’i Jehovah hatao.
6 Dia nandidy Mosesy ka nandefa teny eran’ny toby rehetra nanao hoe: Aza misy manao zavatra intsony hatao fanatitra ho amin’ny fitoerana masina ianareo, na lahy na vavy. Dia izany no nampitsaharana ny olona tsy hanatitra intsony;
8 [Ny nanaovana ny tabernakely sy izay rehetra momba azy] Ary ny hendry rehetra teo amin’izay nanao ny raharaha dia nanao ny tabernakely: dia ambainy folo amin’ny rongony fotsy madinika voahasina sy manga sy volomparasy ary mena; kerobima, asan’ny mpanenona mahay, no nataony sorany.
9 Ny halavan’ny ambainy iray dia valo amby roa-polo hakiho; ary ny lambanan’ny ambainy iray dia efatra hakiho: nitovy ohatra ny ambainy rehetra.
11 Ary nanao tadivavarana manga teo an-tsisin’ny ambainy iray izy, dia teo an-tsisin’ny anankiray efa voavitrana; ary nanao toy izany koa tamin’ny ambainy farany izy, dia teo an-tsisin’ny anankiray efa voavitrana koa.
12 Tadivavarana dimam-polo no nataony teo amin’ny ambainy iray, ary tadivavarana dimam-polo koa no nataony teo amin’ny sisin’ny ambainy izay amin’ny anankiray efa voavitrana koa; ary nifandray ny tadivavarana.
13 Ary nanao farango volamena dimam-polo izy, ka nakambany tamin’ny farango ny ambainy, dia voakambana ho iray ny tabernakely.
14 Ary nanao ambainy koa tamin’ny volon’osy izy ho lay handrakofana ny tabernakely; dia iraika ambin’ny folo ambainy no nanaovany azy.
15 Ny halavan’ny ambainy iray dia telo-polo hakiho, ary ny lambanan’ny ambainy iray dia efatra hakiho; nitovy ohatra ny ambainy iraika ambin’ny folo.
17 Ary nanao tadivavarana dimam-polo ho eo an­tsisin’ny ambainy iray izay farany amin’ny efa voa vitrana izy; ary tadivavarana dimam-polo koa ho eo an-tsisin’ny ambainy iray amin’ny anankiray koa efa voavitrana.
19 Ary nanao rakotry ny lay tamin’ny hoditr’ondrilahy efa nomenaina izy sy sarona hodi-takasy ho eo amboniny.
20 Ary nanao ny zana-kazo akasia ho amin’ny tabernakely izy.
21 Folo hakiho ny hahavon’ny zana-kazo iray, ary iray hakiho sy sasany ny indraben’ny zana-kazo iray.
22 Ary lahiny roa no amin’ny zana-kazo iray, ka nasiany izay hikambanany; izany no nanaovany ny zana-kazo rehetra tamin’ny tabernakely.
23 Ary nanao ny zana-kazo ho amin’ny tabernakely izy, dia zana-kazo roa-polo ho eo amin’ny lafiny atsimo.
24 Ary nanao faladia volafotsy efa-polo izy ho ambanin’ny zana-kazo roa-polo, dia faladia roa avy ho ambanin’ny isan-janakazo hiorenan’ny lahiny roa.
25 Ary nanao zana-kazo roa-polo ho eo amin’ny lafiny faharoa amin’ny tabernakely izy, dia ny lafiny avaratra.
26 Ary nanao faladiany volafotsy efa-polo, izy dia faladia roa avy ho ambanin’ny isan-janakazo.
27 Ary nanao zana-kazo enina ho eo amin’ny lafin’ny tabernakely andrefana izy, izay eo ivohony.
28 Ary nanao zana-kazo roa ho eo amin’ny zoron’ny tabernakely tamin’ny lafiny ivoho izy.
29 Ary nakambana ho iray izy hatramin’ny ambany ka hatramin’ny ambony, ka nasiana vava vola iray ihany; nataony toy izany avokoa izy roa ho eo amin’ny zorony roa.
30 Ary nisy zana-kazo valo sy ny faladiany volafotsy; dia faladia enina ambin’ny folo: faladia roa avy ho ambanin’ny isan-janakazo iray.
31 Ary hazo akasia no nataony barany: dia dimy ho amin’ny zana-kazo amin’ny lafiny iray amin’ny tabernakely,
32 sy barany dimy ho amin’ny zana-kazo amin’ny lafiny iray koa amin’ny tabernakely, ary barany dimy ho amin’ny zana-kazo amin’ny lafiny andrefana izay ao ivohony.
33 Ary nanao ny barany afovoany izy, ho afovoan’ny zana-kazo ka hahatratra ny farany roa.
34 Ary ny zana-kazo nopetahany takela-bolamena, ary nataony volamena koa ny vava vola aminy, izay hitoeran’ny barany: ary nopetahany takela-bolamena koa ny barany.
35 Ary ny efitra lamba dia nataony manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina, ary kerobima, asan’ny mpanenona mahay, no nataony sorany.
36 Ary nanao andry efatra tamin’ny hazo akasia izy hihantonan’izany, ary nopetahany takela-bolamena ireo, sady nataony volamena koa ny fihantonany; ary nandrendrika faladia volafotsy efatra izy’hiorenany.
37 Ary nanao varavarana lamba ho eo amin’ny varavaran’ny lay izy, dia tamin’ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina, asan’ny mahay tenona samy hafa soratra.
1 Ary Bezalila nanao ny fiara tamin’ny hazo akasia: roa hakiho sy sasany ny lavany, ary iray hakiho sy sasany ny sakany, ary iray hakiho sy sasany ny hahavony;
3 Ary nandrendrika vava volamena efatra hatao aminy izy, ka nataony teo amin’ny tongony efatra: dia vava vola roa teo amin’ny lafiny iray, ary vava vola roa teo amin’ny lafiny iray koa.
4 Ary nanao bao tamin’ny hazo akasia izy, ka nopetahany takela-bolamena.
5 Ary nampidiriny ny bao ho eo amin’ny vava vola, izay eo amin’ny lafin’ny fiara, hilanjana azy.
6 Ary nanao rakotra fanaovam-panavotana tamin’ny volamena tsara izy: roa hakiho sy sasany ny lavany, ary iray hakiho sy sasany ny sakany.
7 Ary nanao kerobima volamena roa izy; voasana no nanaovany azy roa miray amin’ny lohany roa amin’ny rakotra fanaovam-panavotana:
8 dia ny kerobima iray nataony teo amin’ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa teo amin’ny sakany anankiray: indray mivofy tamin’ny rakotra fanaovam-panavotana no nanaovany ny kerobima roa, dia teo amin’ny sakany roa.
9 Ary ny elatry ny kerobima nivelatra teo ambony, ka nalofan’ny elany ny rakotra fanaovam-panavotana; ary ny tavany nifanatrika, sady nanatrika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy.
10 Ary nanao ny latabatra tamin’ny hazo akasia izy: roa hakiho ny lavany, ary iray hakiho ny sakany, ary iray hakiho sy sasany ny hahavony.
13 Ary nandrendrika vava volamena efatra hatao aminy izy, ka nataony teo amin’ny zorony efatra, izay eo amin’ny tongony efatra, ireo:
14 eo akaikin’ny sisiny no nisian’ny vava vola ho fitoeran’ny bao hilanjana ny latabatra.
15 Ary nanao ny bao tamin’ny hazo akasia izy, hilanjana ny latabatra, ka nopetahany takela-bolamena.
16 Ary nanao ny fanaka izay eo ambonin’ny latabatra izy, dia ny lovia ny sy ny lovia keliny ary ny kapoakany sy ny fitoeran-divainy ho fanidinam-panatitra; volamena tsara no nanaovany ireo.
17 Ary nanao ny fanaovan-jiro tamin’ny volamena tsara izy; voasana no nanaovany ny fanaovan-jiro; nataony indray mivofy taminy avokoa ny faladiany sy ny tahony sy ny vodi-voniny sy ny kiboriny ary ny voniny.
18 Ary nisy sampany enina tamin’ny ankilany roa, dia sampany telo tamin’ny fanaovan-jiro amin’ny ankilany iray, ary sampany telo tamin’ny fanaovan-jiro amin’ny ankilany iray koa;
19 teo amin’ny sampany anankiray nisy vodi-voniny telo natao tahaka ny vonin’ny amygdala, mbamin’ny kiboriny sy ny voniny; ary teo amin’ny sampany anankiray koa nisy vodi-voniny telo natao tahaka ny vonin’ny amygdala, mbamin’ny kiboriny sy ny voniny; dia toy izany avokoa tamin’ny sampany enina tamin’ny fanaovan-jiro.
20 Ary teo amin’ny fanaovan-jiro dia nisy vodi-voniny efatra natao tahaka ny vonin’ny amygdala, mbamin’ny kiboriny sy ny voniny,
21 dia kiboriny iray eo ambanin’ny sampany roa sady miray aminy, ary kiboriny iray eo ambanin’ny sampany roa sady miray aminy, ary kiboriny iray eo ambanin’ny sampany roa koa sady miray aminy; dia amin’ny sampany enina izay miray amin’ny fanaovan-jiro.
22 Ny kiboriny sy ny sampany dia niray taminy avokoa; natao indray mivofy tamin’ny volamena tsara izy rehetra.
23 Ary nanao ny lela fanaovan-jirony fito sy ny hetin-jirony sy ny fitoeran-davenon-jirony tamin’ny volamena tsara izy.
24 Volamena tsara talenta iray no nanaovany azy mbamin’ny fanaka rehetra momba azy.
25 Ary nanao ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra tamin’ny hazo akasia izy: iray hakiho avy ny lafiny efatra, dia efa-joro tsy mivadi-mandry izy; ary roa hakiho ny hahavony; ary nataony miray aminy ny tandrony.
27 Ary nasiany vava volamena roa izy teo ambanin’ny koronosiny, ka nataony teo amin’ny zorony efatra ireo ho fitoeran’ny bao hilanjana azy.
29 Ary nanao ny diloilo fanosorana masina izy, sy ny zava-manitra manetona madio, asan’ny mpangaroharo zava-manitra.
1 Ary nanao ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana tamin’ny hazo akasia izy: dimy hakiho avy ny lafiny efatra, dia efa-joro tsy mivadi-mandry izy; ary telo hakiho ny hahavony.
2 Ary nanao ny tandrony teo amin’ny zorony efatra izy, ka nataony miray aminy, ary nopetahany takela-barahina ireo.
3 Ary nanao ny fanaka rehetra momba ny alitara izy, dia ny vilaniny fandraofan-davenona sy ny sotron’afony sy ny loviany famafazana sy ny fitrebiny ary ny fitondran’afony; nataony varahina avokoa ny fanaka rehetra momba azy.
4 Ary nanao makarakara vara­hina tahaka ny harato ho eo amin’ny alitara izy, dia eo ambanin’ny sikiny, hatreo ambodin’ny alitara ka hatreo amin’ny fisasahany.
5 Ary nandrendrika vava vola efatra hatao eo an-jorony efatra amin’ny makarakara varahina izy ho fitoeran’ny bao.
6 Ary nanao ny bao tamin’ny hazo akasia izy, ka nopetahany takela-barahina.
7 Ary nampiditra ny bao teo amin’ny vava vola teo amin’ny lafiny roa amin’ny alitara izy hilanjana azy. Ary hazo fisaka no narafiny ho alitara, ka nataony hobokaty.
8 Ary ny tavy varahina sy ny faladiany vara­hina dia nataony tamin’ny fitaratra varahin’ny vehivavy izay nanompo teo anoloan’ny varavaran’ny trano-lay fihaonana.
9 Ary nanao ny kianja izy: tamin’ny lafiny atsimo nisy fefy lamba zato hakiho ho amin’ny kianja natao tamin’ny rongony fotsy madinika voahasina;
10 ary roa-polo ny tsangantsangany, ary roa-polo ny faladiany vara­hina; ary volafotsy ny fihantonany amin’ny tsangantsangany sy ny anjaka hitohizany.
11 Ary tamin’ny lafiny avaratra koa nisy zato hakiho sy ny tsangantsangany roa-polo ary ny faladiany varahina roa-polo; volafotsy ny fihantonany amin’ny tsangantsangany sy ny anjaka hitohizany.
12 Ary tamin’ny lafiny andrefana nisy fefy lamba dimam-polo hakiho; folo ny tsangantsangany ary folo ny faladiany; ary volafotsy ny fihantonana amin’ny tsangantsangany sy ny anjaka hitohizany.
14 Ary nisy fefy lamba dimy ambin’ny folo hakiho tamin’ny ilany iray; telo ny tsangantsangany, ary telo ny faladiany.
15 Ary nisy fefy lamba dimy ambin’ny folo hakiho tamin’ny ilany iray koa; telo ny tsangantsangany, ary telo ny faladiany;
16 Ary nataony rongony fotsy madinika voahasina avokoa ny fefy lamban’ny kianja manodidina.
17 Ary ny faladian’ny tsangantsangany dia nataony varahina; ary ny fihantonana amin’ny tsangantsangany sy ny anjaka hitohizany nataony volafotsy; ary ny lohany dia nopetahany takela-bolafotsy; ary ny tsangantsangany rehetra tamin’ny kianja dia samy nisy anjaka volafotsy hitohizany avokoa.
18 Ary ny vavahady lamba eo am-bavahadin’ny kianja dia asan’ny mahay tenona samy hafa soratra tamin’ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina; roa-polo hakiho ny halavany; ary ny hahavony nitovy tamin’ny lambanan-damba, dia dimy hakiho, araka ny hahavon’ny fefy lamban’ny kianja.
19 Ary efatra ny tsangantsangany, ary efatra ny faladiany varahina; ary ny fihantonany dia volafotsy; ary ny takela-bola tamin’ny lohany sy ny anjaka hitohizany dia volafotsy koa.
20 Ary ny tsimatra amin’ny tabernakely sy amin’ny kianja manodidina dia nataony varahina avokoa.
21 [Tontalin’ny volamena sy volafotsy ary vara­hina izay lany] Ary izao no isan’ny zavatra nomba ny tabernakely, dia ny tabernakelin’ny Vavolombelona, izay nisaina araka ny didin’i Mosesy; natao fanompoan’ny Levita, fehin’Itamara, zanak’i Arona mpisorona, ny nanisa azy.
22 Ary Bezalila, zanak’i Ory, zanak’i Hora, avy amin’ny firenen’i Joda, nanao izay rehetra nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
23 Ary ny namany dia Oholiaba, zanak’i Ahisamaka, avy amin’ny firenen’i Dana, mpiasa tefy sy rafitra ary mpanenona mahay sady nahay tenona samy hafa soratra tamin’ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika.
24 Talenta sivy amby roa-polo, ary sekely telo-polo amby fiton-jato, araka ny sekely masina, ny volamena rehetra izay lany tamin’ny asa rehetra tamin’ny fitoerana masina, dia ny volamena izay natao fanatitra ahevaheva.
25 Ary ny volafotsy avy tamin’ny olona izay voaisa tamin’ny fiangonana dia talenta zato sy sekely dimy amby fito-polo amby fiton-jato amby arivo, araka ny sekely masina:
26 beka iray isan-olona, dia antsasaky ny sekely araka ny sekely masina, no naloan’izay rehetra voalamina, hatramin’ny roa-polo taona no ho miakatra, dia olona dimam-polo amby diman-jato amby telo arivo sy enina hetsy.
27 Ary ny volafotsy talenta zato dia narendrika nanaovana ny faladian’ny fitoerana masina sy ny faladian’ny efitra lamba: dia faladia zato tamin’ny talenta volafotsy zato, talenta iray ny faladiany iray.
28 Ary tamin’ny sekely dimy amby fito-polo amby fiton-jato sy arivo no nanaovany ny fihantonana tamin’ny andry, sy nametahana takela-bola tamin’ny lohany, ary nanaovany ny anjaka hitohizany.
30 Ary izany no nanaovany ny faladiany ho amin’ny varavaran’ny trano-lay fihaonana, sy ny alitara varahina sy ny makarakara varahina izay teo aminy ary ny fanaka rehetra momba ny alitara,
31 ary ny faladia tamin’ny kianja manodidina sy ny faladia tamin’ny vavahadin’ny kianja, sy ny tsimatra rehetra tamin’ny tabernakely ary ny tsimatra rehetra tamin’ny kianja manodidina.
1 [Ny nanaovana ny fitafian’ny mpisorona] Ary tamin’ny manga sy ny volomparasy ary ny mena no nanaovany ny fitafiana makarakara*, hanaovana fanompoam-pivavahana ao amin’ny fitoerana masina, ary nanao ny fitafiana masina ho an’i Arona izy, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.[Na: fitondra manompo]
2 Ary nanao ny efoda tamin’ny volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina izy.
3 Ary namisaka ny volamena ho takelaka manify izy, dia nandidididy azy ho kofehy volamena, hahasiny amin’ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary ny rongony fotsy madinika, dia asan’ny mpanenona mahay.
4 Ary nataony nisy soroka roa avy amin’ny sisiny roa hampikambanana azy.
5 Ary ny fehin-kibo momba ny efoda, izay teo amboniny, dia niray taminy sady nitovy tarehy taminy, ka nataony volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
6 Ary ny vato beryla nasiany randram-bola­mena manodidina, ary dia nosoratany, tahaka ny fanoratana fanombohan-kase, araka ny anaran’ny firenen’ny Zanak’Isiraely.
7 Ary nataony teo amin’ny soroky ny efoda ny vato, ho vato fahatsiarovana ho an’ny Zanak’Isiraely, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
8 Ary nanao ny saron-tratra tamin’ny asan’ny mpanenona mahay izy, tahaka ny nanaovana ny efoda, dia volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina.
14 Ary ny vato dia nalahatra araka ny anaran’ny firenen’ny Zanak’Isiraely, dia roa ambin’ny folo araka ny anarany; ary nisy soratra toy ny amin’ny fanombohan-kase ho an’ny firenena roa ambin’ny folo araka ny anarany avy.
15 Ary nanao olam-bolamena tsara mifanolana toy ny tady ho eo amin’ny saron-tratra izy.
16 Ary nanao randram-bolamena roa sy vava volamena roa izy; ary ny vava vola dia nataony teo amin’ny zorony roa ambony amin’ny saron-tratra.
17 Ary ny tady volamena roa dia nataony teo amin’ny vava vola roa izay amin’ny zorony roa ambany amin’ny saron-tratra.
18 Ary ny lanin’ny tady roa dia nataony teo amin’ny randram-bolamena roa, dia nataony teo amin’ny soroky ny efoda anoloana.
19 Ary nanao vava volamena roa izy ka nataony teo amin’ny zorony roa ambany amin’ny saron-tratra, dia amin’ny sisiny anatiny izay manolotra ny efoda.
20 Ary nanao vava volamena roa koa izy ka nataony teo amin’ny soroka roa amin’ny efoda, dia ao ambaniny,eo anoloany, akaikin’ny fikambanany, eo ambonin’ny fehin-kibo momba ny efoda.
21 Ary kofehy manga no namehezany ny vava volan’ny saron-tratra tamin’ny vava volan’ny efoda, mba ho eo ambonin’ny fehin-kibo momba ny efoda ny saron-tratra ka tsy ho afaka eo, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
22 Ary nanao ny akanjo ivelany misy ny efoda, asan’ny mpanenona, izy, ka nataony manga avokoa.
23 Ary ny vozon’ny akanjo ivelany dia teo afovoany tahaka ny vozon’ny akanjo fiarovan-tratra, ary nisy sisiny manodidina ny vozony mba tsy hahatriatra azy.
24 Ary teo amin’ny moron-tongotry ny akanjo ivelany dia nasiany sarin’ampongaben-danitra manga sy volomparasy sy mena voahasina;
25 ary nanao famohamandry volamena tsara izy, ary ny famohamandry dia nataony teo anelanelan’ny ampongaben-danitra tamin’ny moron-tongotry ny akanjo ivelany manodidina (dia teo anelanelan’ny ampongaben-danitra):
26 dia famohamandry sy sarin’ampongaben-danitra mifanelanelana manodidina eo amin’ny moron-tongotry ny akanjo ivelany, ho entiny manao ny fanompoam-pivavahana, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
27 Ary ny akanjo lava nataony rongony fotsy madinika, asan’ny mpanenona, ho an’i Arona sy ny zanany.
29 Ary ny fehin-kibo nataony rongony fotsy madinika voahasina sy manga sy volomparasy ary mena, asan’ny mahay tenona samy hafa soratra, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
30 Ary ny takelaka ho eo amin’ny diadema masina dia nataony volamena tsara, ary nasiany soratra, araka ny fanoratana amin’ny fanombohan-kase, hoe: HAMASININA HO AN’I JEHOVAH.
31 Ary nasiany kofehy manga hamehezany azy amin’ny hamama eo ambony, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
32 Ary vita ny asa rehetra tamin’ny tabernakelin’ny trano-lay fihaonana; fa ny Zanak’Isiraely efa nanao araka izay rehetra nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
33 Dia nentiny teo amin’i Mosesy ny tabernakely; dia ny lay sy ny fanaka rehetra nomba azy, ary ny farangony sy ny zana-kazony ary ny barany sy ny andriny ary ny faladiany,
34 ary ny firakotra hoditr’ondrilahy efa nomenaina sy ny sarona hodi-takasy, ary ny efitra lamba fanakonana,
35 ary ny fiaran’ny Vavolombelona sy ny baony ary ny rakotra fanaovam-panavotana,
38 ary ny alitara volamena sy ny diloilo fanosorana sy ny ditin-kazo mani-pofona ary ny varavarana lamba ho eo amin’ny varavaran’ny trano-lay,
40 ary ny fefy lamban’ny kianja sy ny tsangantsangany sy ny faladiany ary ny vavahady lamba eo amin’ny vavahadin’ny kianja ary ny kofehiny sy ny tsimatra, ary ny fiasana rehetra momba ny tabernakelin’ny trano-lay fihaonana,
41 ary ny fitafiana makarakara ho enti-manao fanompoam-pivavahana ao amin’ny fitoerana masina ho an’i Arona mpisorona sy ny fitafian’ny zanany ho entiny manao fisoronana.
42 Araka izay rehetra efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy, dia toy izany no nanaovan’ny Zanak’Isiraely ny asa rehetra.
43 Ary nizaha ny asa rehetra Mosesy, ka, indro, efa nataony araka izay nandidian’i Jehovah; dia nisaotra azy Mosesy.
1 [Ny nananganana ny tabernakely] Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe:
2 Amin’ny andro voalohany amin’ny volana voalohany dia atsangano ny tabernakelin’ny trano-lay fihaonana.
3 Ary ataovy ao ny fiaran’ny Vavolombelona; dia ahantòny ny efitra lamba hanakona ny fiara.
5 Ary ny alitara volamena fandoroana ditin-kazo manitra dia ataovy eo anoloan’ny fiaran’ny Vavolombelona, ary ny varavarana lamba dia ataovy eo amin’ny varavaran’ny tabernakely.
6 Ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia apetraho eo anoloan’ny tabernakelin’ny trano-lay fihaonana.
7 Ary ny tavy dia apetraho eo anelanelan’ny trano-lay fihaonana sy ny alitara, ka asio rano eo anatiny.
8 Ary amboary ny kianja manodidina, ka ahantòny ny vavahady lamba eo amin’ny vavahadin’ny kianja.
9 Ary alao ny diloilo fanosorana, ka hosory ny tabernakely sy izay rehetra ao, dia hamasino izy mbamin’ny fanaka rehetra momba azy, ka dia ho masina izy.
12 Ary ento Arona sy ny zanany hankeo anoloan’ny varavaran’ny trano-lay fihaonana, ka ampandroy amin’ny rano izy.
13 Ary ampiakanjoy an’i Arona ny fitafiana masina, dia hosory sy hamasino izy, mba ho mpisorona ho Ahy.
15 Ary hosory izy, tahaka ny nanosoranao ny rainy, mba ho mpisorona ho Ahy; ary ny fanosorana azy dia ho fisoronana mandrakizay ho azy hatramin’ny taranany fara mandimby.
16 Dia nataon’i Mosesy izany: araka izay rehetra efa nandidian’i Jehovah azy no nataony.
17 Ary tamin’ny andro voalohany tamin’ny volana voalohany tamin’ny taona faharoa no nananganana ny tabernakely.
19 Ary namelatra ny lay teo ambonin’ny tabernakely izy, ary ny firakotry ny lay nataony teo amboniny, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
20 Dia nalainy ny Vavolombelona ka napetrany tao anatin’ny fiara, ary ny bao dia nataony teo amin’ny fiara, ary ny rakotra fanaovam-panavotana dia napetrany teo ambonin’ny fiara.
21 Ary ny fiara dia nampidiriny tao amin’ny tabernakely, ka nahantony ny efitra lamba fanakonana hanakona ny fiaran’ny Vavolombelona, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
22 Ary ny latabatra dia napetrany teo amin’ny trano-lay fihaonana, dia teo amin’ny lafin’ny tabernakely avaratra, teo ivelan’ny efitra lamba.
23 Ary nandahatra mofo teo amboniny teo anatrehan’i Jehovah izy, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
24 Ary ny fanaovan-jiro dia napetrany teo amin’ny trano-lay fihaonana, tandrifin’ny latabatra, teo amin’ny lafin’ny tabernakely atsimo.
25 Ary nampirehitra ny jiro teo anatrehan’i Jehovah izy, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
26 Ary ny alitara volamena dia nataony teo amin’ny trano-lay fihaonana, teo anoloan’ny efitra lamba;
27 ary nandoro ditin-kazo mani-pofona teo izy, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
28 Ary ny varavarana lamba dia nataony teo amin’ny varavaran’ny tabernakely;
29 ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia napetrany teo anoloan’ny varavaran’ny tabernakelin’ny trano-lay fihaonana; ary nateriny teo amboniny ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hohanina, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
30 Ary ny tavy dia nataony teo anelanelan’ny trano-lay fihaonana sy ny alitara, ka nasiany rano teo anatiny hanasana.
31 Ary teo no nanasan’i Mosesy sy Arona ary ny zanany ny tongony aman-tànany.
32 Raha niditra tao amin’ny trano-lay fihaonana izy, ary raha nanakaiky ny alitara, dia nisasa izy, dia araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
33 Ary natsangany koa ny kianja manodidi­na ny tabernakely sy ny alitara; ary ny vava­hady lamba dia nataony teo amin’ny vavahadin’ny kianja. Dia vitan’i Mosesy ny asa rehetra.
34 Ary ny rahona nanarona ny trano-lay fihaonana, ary ny voninahitr’i Jehovah nameno ny tabernakely.
35 Ary Mosesy tsy nahazo niditra tao amin’ny trano-lay fihaona­na, satria ny rahona nitoetra teo amboniny, ary ny voninahitr’i Jehovah nameno ny tabernakely.
36 Ary raha niakatra niala tamin’ny tabernakely ny rahona, dia nifindra ny Zanak’Isiraely tamin’ny nandehanany rehetra;
37 fa raha tsy niakatra ny rahona, dia tsy nifindra izy, mandra-pihavin’izay andro hiakarany.
38 Fa ny rahon’i Jehovah dia teo ambonin’ny tabernakely nony andro, ary nisy afo teo aminy nony alina, teo imason’ny taranak’Isiraely rehetra, tamin’ny nandehanany rehetra.
Top de la page ^
Exorcisme de Andry par le Pasteur Mailhol →